काेराेना भाइरस LIVE अपडेट्स
चीनकाे वुहानबाट सुरु भएकाे काेराेना भाइरस अहिलेसम्म विश्वका अधिकांश देशमा देखिइसकेकाे छ । यसका कारण हुने काेभिड १९ राेगका कारण पछिल्लाे समय इटाली, इरान, स्पेन, बेलायत र अमेरिका सबैभन्दा बढी ग्रसित छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि काेराेना भाइरस संक्रमित बढिरहेका छन् । १० चैत साेमबारसम्म भारतमा काेभिड १९ का कारण ७ जनाकाे मृत्यु भइसकेकाे छ ।
आइतबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले काेराेना संक्रमण नेपाल नभित्रियाेस् भन्नका लागि चीन र भारत दुवैतिरका सीमा नाका एक साता बन्द गर्ने निर्णय गरेकाे छ । तर यसक्रममा खाद्यान्ना ल्याउने काम चाहिँ राेकिने छैन ।
याे लाइभ फिडमा हामी नेपाल र विश्वमा काेराेनाबारेका समाचार दिने छाैँ ।
काेराेनाविरुद्ध बच्न नियमित साबुन पानीले हात धुनुहाेस्, सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कनुस् ।
फरक धार | १८:५१:३
कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथामका लागि भारतमा २५ मार्चदेखि २१ दिने लकडाउन आह्वान गरिएको । अब यो लकडाउन १४ अप्रिल सकिने भएपछि त्यसपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न त्यहाँ उब्जिन थालेको छ ।
तर, पछिल्लो समय भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ । त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्रीहरुले लकडाउन जारी राख्न अनुरोध गरेका थिए ।
अब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले अहिले तत्काल भारतमा लकडाउन हटाउन सम्भव नभएको बताएका छन् । भिडियो कन्फ्रेन्सका माध्यमबाट राजनीतिक दलका नेताहरुसँग उनले गरेको बैठकमा यो बताएका हुन् । ‘सम्भव छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘लकडाउन हट्दैन ।’
यो कुराकानीमा उनले आफ्नो पूरै समय लकडाउनका लागि नै दिएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।
‘अहिले देशमा सामाजिक आपतकाल लागेको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘हामी अझ सतर्क हुन जरुरी छ ।’
अहिले भारतमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या ५ हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।
सिंगापुरमा ‘सर्किट ब्रेकर’ लकडाउन
एजेन्सी | १५:३१:३९
एजेन्सी– सिंगापुरले अब देशभरका विभिन्न ठाउँमा सामाजिक तथा व्यक्तिगत तथा अन्य कुनै पनि खालका भेटघाटहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । कोभिड १९ विरुद्ध सिंगापुरले लिएको यो कदमलाई त्यहाँ ‘सर्किट ब्रेकर’ नामको नियम भनिएको छ ।
त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा जारी गरिएको सूचनाअनुसार यो नियम मंगलबार मात्र त्यहाँको संसदले पारित गरेको थियो । अब बुधबारबाट नै लागु गरिएको यो नियम कम्तिमा पनि ४ मेसम्म लागु हुने बताइएको छ ।
अहिलेसम्म सिंगापुरमा १४८१ जना कोरोनाभाइरस संक्रमित भेटिएका छन् । अनि त्यहाँ ६ जनाको कोभिड १९ का कारण मृत्यु भएको छ ।
अमेरिकामा एकै दिन १८ सयको मृत्यु
फरक धार | १४:१४:८
एजेन्सी– कोरोनाभाइरस संक्रमणले अब अमेरिकामा कहर मच्चाउने प्रष्ट भएको छ । मंगलबारमात्र अमेरिकामा अहिलेसम्म विश्वकै एकै दिन यो भाइरसका मृत्यु हुनेको संख्यामा रेकर्ड कायम भएको छ ।
मंगलबारमात्र अमेरिकामा कम्तिमा पनि १८ सय जनाको कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएको मानिएको छ । अहिलेसम्म यो महामारीपछि एकै दिन यति धेरै मृत्यु भएको यो पहिलो पटक हो ।
यसका साथै अमेरिकामा कोभिड १९ का कारण मृत्यु हुनेको संख्या १३ हजार पुगेको छ । अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ लाख पुगिसकेको छ । कुनै पनि देशमा यति धेरै संक्रमित भएको पनि यो पहिलो पटक हो ।
योसँगै विश्वमा अब कोरोना संक्रमितको संख्या १४ लाख कटिसकेको छ ।
फरक धार | ४:३:४७
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई अमेरिकाले दिइरहेको रकम सहयोग गर्न छोड्नेबारे आफूले विचार गरिरहेको बताएका छन् ।
उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनले अमेरिकासँग रकम लिएको तर चीनसँग मिलेर काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै यस्तो योजना बनाएका हुन् ।
यसअघि पनि ट्रम्पले स्वास्थ्य संगठनले गर्दा अमेरिकामा कोरोनाभाइरस यति धेरै फैलिएको आरोप लगाएका थिए । उनले चीनसँग अमेरिकाले उडान रद्द गर्दासमेत विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफूहरुलाई सही सूचना नदिएको र सहयोग नगरेको पनि दाबी गरेका थिए ।
उनले चीनले दिएको सूचना पनि गलत भएको तर त्यसलाई स्वास्थ्य संगठनले समर्थन गरिरहेको बताएका छन् ।
‘मैले त्यति बेला चीन र युरोपसँगका उडानहरु नरोकेको भए अहिले अमेरिकामा लाखौँ मानिसको मृत्यु भइसकेको हुन्थ्यो,’ उनले भनेका छन् । उनले थपेका छन्, ‘पहिले त मलाई कुनै पनि समस्या छैन भन्ने बिफ्रिङ गरिएको थियो, हामीलाई उनीहरुले गलत सूचना दिइरहेका छन् । उनीहरु हामीसँग पैसा लिएका छन् र चीन केन्द्रीत भएका छन् ।’
उनले पछिल्ला वर्षमा डब्लूएचओ चीनप्रति वफादार भएको पनि आरोप लगाएका छन् ।
अमेरिकीलाई ट्रम्पले भने– कोरोनाको औषधी बनिरहेको छ, हामी तपाईंको रक्षा गर्नेछौँ
एजेन्सी | ३:४६:५४
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अहिले अमेरिकामा केही कम्पनीहरुले अहिले निकै द्रुत गतिमा कोरोनाभाइरसविरुद्धको औषधीमा काम गरिरहेको बताएका छन् । उनले दुई विभिन्न भ्याक्सिनमा पनि काम भइइरहेको बताएका छन् ।
सँगसँगै उनले अहिले अमेरिकामा अभाव भएको भेन्टिलेटर जुनसम्म १ लाखभन्दा धेरै भइसक्ने पनि बताएका छन् । अनि त्यसबाट २ सय वटा भेन्टिलेटर बेलायतलाई सहयोग गर्ने पनि बताएका छन् ।
मंगलबारको ब्रिफिङमा ट्रम्पले अहिले आठ वटा कम्पनीले औषधीमै काम गरिरहेकाले कोरोनाभाइरसलाई जित्न सकिने पनि बताएका छन् ।
उनले अमेरिकीहरुलाई आश्वासान दिँदै प्रत्येक प्रान्तमा निकै राम्रो काम भएको र कुनै गर्भनरले काम गर्न नसके केन्द्र सरकारले नै त्यहाँका जनतालाई हेर्ने आश्वासन पनि दिएका छन् ।
न्युयोर्कमा शव व्यवस्थापन गर्न सकिएन, तरकारी राख्न बनाइएको कोल्ड स्टोरमा राखिने
एजेन्सी | १:१४:२०
अमेरिकाको न्युयोर्कको सफोक काउन्टीमा छोटो समयमा कोरोनाभाइरसका कारण अत्यन्त धेरेको मृत्यु भएपछि शव व्यवस्थापन समस्याको विषय बनेको छ ।
सिएनएनमा आएको रिपोर्टअनुसार अब त्यहाँको सरकारले शवहरु तत्कालका लागि तरकारी राख्न बनाइएको कोल्ड स्टोर प्रयोग गर्ने बताएको छ ।
उक्त काउन्टीका प्रवक्तासँग कुरा गर्दै सिएनएनले लेखेको छ– त्यहाँ भएको एउटा ठूलो कोल्ड स्टोरमा अहिले तत्कालका लागि शव राख्नेबारे काउन्टीका प्रवक्ताले पुष्टि गरेका छन् ।
अहिले त्यहाँ शव राख्ने ठाउँ भरिइसकिएको बताइएको छ ।
‘हामीले यस्तो अवस्थाबारे सोचेकै थिएनौँ,’ काउन्टीका प्रमुख बेलोनीले भनेका छन्, ‘अब छलफलमा जुट्न थालेका छौँ ।’
यो क्षेत्रमा मात्र सोमबार कम्तिमा पनि २ सय जनाको कोभिड १९ का कारण निधन भएको थियो ।
फरक धार | २३:४९:३०
कोरोनाभाइरस सुरुमा देखिएको चीनको वुहान सहर अब आशिंक रुपमा खुल्न थालेको छ । चीनले सोमबार र मंगलबार आफ्नो देशमा कोरोना संक्रमणका कारण एकजनाको पनि मृत्यु नभएको बताएको छ ।
अब वुहानमा रेलहरु गुड्न थालेका छन्, विमानहरु उड्न थालेका छन् । त्यहाँ २३ जनवरीदेखि पूर्ण लकडाउन आह्वान गरिएको थियो ।
वुहान प्रहरीले अब त्यहाँ सवारी चालकहरुलाई केही दिन अत्यधिक ट्राफिक हुने चेतावनी पनि दिएको छ । वुहान खुलाएसँगै त्यहाँबाट २ सय विमानले उडान भर्ने र १० हजार मानिस बाहिर जाने बताइएको छ ।
चिनियाँ मिडियाहरुले पनि त्यहाँ रेलहरु गुडेको र विमानहरुमा मानिसहरु बोर्डिङ गरेको फुटेज तथा तस्वीरहरु राख्न थालेका छन् । अब त्यहाँ बाटोमा राखिएका अवरोधहरु हटाइएका छन्, मानिसहरु निस्फिक्री सहरमा घुम्न थालेका छन् ।
दस साताभन्दा बढी त्यहाँ लाखौँ मानिसहरु घरभित्र बस्न बाध्य भएका थिए ।
न्युयोर्कमा ह्वात्तै बढ्यो कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएकाको संख्या
एजेन्सी | २१:५२:२६
एजेन्सी– अमेरिकी सहर न्युयोर्कका गर्भनर एन्ड्र्यु क्युमोले केहीअघि त्यहाँ आज भएका मृत्यु र कोरोना संक्रमितको संख्याबारे नयाँ जानकारी दिउका छन् ।
उनका अनुसार सोमबार न्युयोर्कमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ । उनका अनुसार सोमबारमात्र ७३१ जनाले कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
न्युयोर्कमा मात्र अहिलेसम्म कोभिड १९ का कारण ५ हजार ४ सय ८९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अनि त्यहाँ ३९ हजारभन्दा धेरै संक्रमित भेटिएका छन् ।
उनले छिमेकी न्यु जर्सीमा मृतकको संख्या अझ धेरै भएको बताएका छन् । उनका अनुसार न्यु जर्सीमा कम्तिमा पनि एक हजार जनाले एकै दिनमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
फरक धार | २१:२४:२६
चीनले पछिल्ला दुई दिनमा कोरोना भाइरसका कारण एक जनाको पनि मृत्यु नभएको तथ्यांक बाहिर ल्याएको छ । गत वर्ष वुहानमा पहिलो पटक भेटिएको यो भाइरसबाट चीनमा एक जनाको पनि मृत्यु नभएको यो पहिलो पटक हो ।
चीनले तीन महिनापछि पहिलो पटक आफ्नो देशमा भएका कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या पनि जारी गरेको थियो । चीनले दिएको तथ्यांकअनुसार ७ अप्रिलसम्म ८१ हजार ७ सय ४० जना कोरोनाभाइरस संक्रमित भएका छन् । अनि कोभिड १९ का कारण अहिलेसम्म चीनमा ३३३१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
जुन ठाउँबाट कोरोनाभाइरस सुरु भएको हो, त्यही ठाउँले छोटो समयमा यो महामारीलाई नियन्त्रणमा लिएको भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि चीनलाई प्रशंसा गरेको छ ।
तर, यो सबबीच पनि विश्वले अहिले पनि चिनियाँ यो तथ्यांकमा अविश्वास गरिरहेको छ ।
गत साता बेलायती मन्त्री मिसेल गोभले पनि बिबिसीसँग भनेका थिए– चिनियाँ रिपोर्टिङ खासमा प्रष्ट थिएन ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि बारम्बार चिनियाँ तथ्यांकमाथि अविश्वास गर्दै आएका छन् । आखिर यो सबको कारण विश्वका अन्य देशमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या निकै बढ्दै जानु भएको पनि बताइएको छ ।
जे भए पनि आखिर किन चिनियाँ तथ्यांकमाथि यति ठूलो अविश्वास गरिएको छ त ?
यसको जवाफमा विश्वका विज्ञहरुले एउटा जवाफ दिन्छन्– सधैं आफ्ना तथ्यांक चीनले लुकाइरहने भएकाले ।
चीनले यसअघि पनि विभिन्न सन्दर्भमा विश्वले पत्याउन नसक्ने तथ्यांकहरु दिँदै आएको छ । उसको आर्थिक विकासको सन्दर्भमा पनि यो लागु हुँदै आएको छ ।
यो महामारीअघि चीनले आफ्नो आर्थिक विकास ६ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । अहिलेसम्म चीनले विभिन्न वर्षमा लिएका आर्थिक विकास पनि पूरा हुँदै आएका थिए । तर, यसबारे पनि विश्वले बारम्बार प्रश्न गर्ने गरेको थियो । किनकि चिनियाँ अर्थतन्त्रबारे त्यहाँका अर्थशास्त्रीहरुले मात्र पढ्ने गरेका छन् । विश्वका अन्य अर्थशास्त्रीले चिनियाँ यस्ता दाबीहरु अत्यन्त कम विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।
चीनको कम्युनिस्ट पार्टीका नीति तथा रणनीतिका कारण पनि यस्तो भएको विश्वास धेरैले गर्ने गरेका छन् ।
आर्थिक विकासको सन्दर्भमा पनि चीनले बारम्बार झुट बोलेको आरोप लागिरहँदा कोरोनाभाइरसबारे उसको तथ्यांकमा आशंका गरिनु नराम्रो होइन ।
स्कटल्यान्डमा एकै दिन ७४ जनाको मृत्यु
एजेन्सी | १८:३२:८
स्कटल्यान्डकी फस्र्ट मिनिस्टर निकोला स्ट्रजिअनले दैनिक गरिने प्रेस कन्फरेन्समा स्कटल्यान्डमा पछिल्लो २४ घन्टामा ७४ जनाको कोभिड १९ का कारण मृत्यु भएको जानकारी दिएकी छिन् ।
उनले अहिले स्कटल्यान्डमा योसँगै २ सय ९६ जनाको निधन भएको बताएकी छिन् ।
उनले बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको पनि स्वास्थ्यलाभको कामना गरेकी छिन् ।
बेलायती प्रमको स्वास्थ्य स्थिर
एजेन्सी | १७:५७:३७
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको अवस्था स्थिर भएको बताइएको छ । उनले एक रात लन्डनको अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आइसियू)मा बिताएका छन् ।
उनका प्रवक्ताले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार उनको स्वास्थ्यअवस्था सामान्य रहेको छ ।
उनले अक्सिजन लिइरहेको र पछिल्लो समय उनको स्वास्थ्यमा सुधार देखिएको उनको कार्यालयले जनाएको हो ।
‘उनलाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता अहिलेसम्म परेको छैन,’ प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘अनि उनलाई अहिलेसम्म न्युमोनिया पनि देखिएको छैन ।’
जोनसलाई स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै सावधानी अपनाउने हेतुले आइसियूमा लगिएको पनि बताइएको छ ।
अर्कोतिर, विश्वभर विभिन्न फेक अनलाइनका लिंक सेयर गरेर जोनसनको निधन भएको समाचार सामाजिक सन्जालमा व्यापक सेयर भइरहेका छन् ।
स्पेनको आशः मेबाट फुटबल खेलहरु हुने
एजेन्सी | १७:५२:१२
एजेन्सी– स्पेनिस लिग ला लिगाका अध्यक्ष जाभियर टेबासले स्पेनको घरेलु लिग मेबाट सुरु हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । आशामात्र होइन, उनले २८ मेबाट खेलहरु सुचारु गर्ने पनि बताएका छन् ।
त्यहाँ हुने खेलहरु ११ मार्चबाट रोकिएका थिए ।
ला लिगाका क्लबहरुले योबीचमा १ बिलियन युरो गुमाउने पनि उनले बताएका छन् ।
उनले २९ मे, ७ जुन र २८ जुन तीन मिति दिँदै फुुटबल खेल सुरु हुने तायारी गरेका हुन् ।
इटालीमा कोरोनाभाइरसका कारण ९४ डाक्टर र २६ नर्सकाे मृत्यु
एजेन्सी | १७:०:१०
इटालीको चिकित्सकीय संघले देशमा ९४ जना चिकित्सकले कोरोनाभाइरसका कारण ज्यान गुमाएको छ । त्यस्तै, २६ जना नर्सले पनि कोभिड १९ का कारण मृत्युवरण गरेका छन् ।
अहिले इटालीमा कम्तिमा पनि ६ हजार ५ सय ४९ जना नर्स कोरोनाभाइरस संक्रमित भएको पनि बताइएको छ ।
सोमबारका अनुसार अब इटालीमा १२ हजार ६ सय ८१ जना स्वास्थ्यकर्मी कोरोनाभाइरस संक्रमित भएका छन् ।
युरोपमा सबैभन्दा बढी प्रभावित इटालीमा पिपिई अभावमा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको बताइएको छ । अनि यसलाई गम्भीर भएर लिन पनि त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीसम्बन्धी संघसंस्थाले आह्वान गरेका छन् ।
‘भारतमा लकडाउन बढ्ने’
एजेन्सी | १६:०:५९
कोरोनाभाइरस प्रकोपबाट लड्नका लागि अहिले भारतमा लकडाउन आह्वान गरिएको छ । २५ मार्चमा गरिएको २१ दिने लकडाउन आह्वान फेरि बढ्ने अब भारतीय मिडियाले रिपोर्ट गर्न थालेका छन् ।
अनि यसको आधार हो– त्यहाँका राज्य सरकारहरुले केन्द्र सरकारलाई दिएका सिफारिस । त्यहाँका अधिकांश राज्य सरकारहरुले केन्द्र सरकारलाई लकडाउन लम्ब्याउन अनुरोध गरेको नवभारतटाइम्समा समाचार छ ।
समाचार एजेन्सी एनएनआईका अनुसार सरकारी अधिकारीहरु पनि लकडाउन बढाउने पक्षमा छलफल गरिरहेका छन् ।
यसअघि भारतमा गरिएको लकडाउनको आह्वान १४ अप्रिलमा सकिँदै छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय क्याबिनेटको बैठकमा पनि यही विषयमा छलफल गरेको बताइएको छ ।
पछिल्लो समय भारतका विभिन्न क्षेत्रमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या थपिँदै जाँदा वा बढ्दै जाँदा भारत सरकारले लकडाउन बढाउनुको अर्को विकल्प नदेखेको पनि विभिन्न मिडियाले रिपोर्ट प्रकाशन गरेका छन् ।
स्पेनमा फेरि बढ्यो दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या
एजेन्सी | १५:४३:८
एजेन्सी– पछिल्ला २४ घन्टामा स्पेनमा कोभिड १९ का कारण ७ सय ४३ जनाको निधन भएको छ । योसँगै स्पेनमा अब मृत्यु हुनेको संख्या १३ हजार ७ सय ९८ पुगेको छ ।
केही दिनयता स्पेनमा दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या कम हुँदै गएको थियो । तर, मंगलबार अचानक त्यहाँ मृतकको संख्या बढ्न थालेको हो ।
मंगलबार आएको यो संख्या अघिल्लो दिनको भन्दा एक सयभन्दा बढीले बढी हो ।
अहिले स्पेनमा १ लाख ४० हजार ५ सय जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिइसकेको छ । अमेरिकापछि सबैभन्दा धेरै कोरोनाभाइरस संक्रमित भएको देश नै स्पेन बनेको छ ।
फरक धार | १४:५२:११
एजेन्सी– जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले देशमा एक महिनाको संकटकाल घोषणा गरेका छन् ।
कोरोनाभाइरसविरुद्ध लड्न बनेको विशेष टास्क फोर्सको बैठकपछि उनले यो घोषणा गरेका हुन् ।
यो संकटकाल आजबाट ६ मेसम्म लागु हुने बताइएका् छ । अनि यसमा टोकियोसहित कोरोनाभाइरस प्रभावित क्षेत्रहरु पर्ने जनाइएको छ ।
अबेले हिजोमात्र जापानमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या बढेको भन्दै संकटकाल लगाउन सकिने संंकेत गरेका थिए ।
उनले गरेको घोषणामा अत्यवाश्यक तथा आधारभूत आर्थिक गतिविधि चाहिँ जारी रहने बताइएको छ । त्यहाँ अझै पनि सुपरमार्केटहरु खुल्ने बताइएको छ । अनि अबेले जापानी जनतालाई घरमा नै रहन अनुरोध समेत गरेका छन् ।
चीनमा भएन एक जनाको पनि मृत्यु
एजेन्सी | १४:२२:३२
एजेन्सी– कोरोनाभाइरसको उद्गम स्थल मानिएको चीनमा पछिल्लो समय कोरोना कहर निकै घटेको छ । पछिल्लो समय युरोप र अमेरिकामा ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको कोरोनाभाइरस अब चीनमा निकै हदसम्म कन्ट्रोलमा आएको छ ।
पछिल्लो समाचारअनुसार अब चीनमा कोरोनाभाइरसका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन । अनि सोमबार चीनमा कोरोनाभाइरस संक्रमित जम्मा ३२ जना भेटिएका छन् ।
चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या अहिलेसम्म ८१ हजार ७४० पुगेको छ । त्यहाँ कोरोनाभाइरसका कारण ३३३१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
चीनको सबैभन्दा बढी प्रभावित हुबेई प्रान्तमा जनजीवन सामान्य हुन थालेको छ । त्यहाँ लगाइएका अधिकांश प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गर्न थालिएका छन् ।
उता, दक्षिण कोरियामा पनि लगातार दोस्रो दिन कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या निकै घटेको छ । सोमबार लगातार दोस्रो दिन दक्षिण कोरियामा कोरोनाभाइरस संक्रमित ५० भन्दा कम भेटिएका छन् । यीमध्ये १७ जना विदेशबाट दक्षिण कोरिया पुगेको जनाइएको छ ।
एजेन्सी | २:४६:८
एजेन्सी– बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको स्वास्थ्यअवस्था निकै खस्किएको बेलायती मिडियाले उल्लेख गर्न थालेका छन् । यसबीच उनलाई विश्वभरका नेताहरुले शुभकामना पठाइरहेका छन् ।
बिबिसीमा आएको समाचारअनुसार उनको सचिवालयले अहिले बेलायती महारानी एलिजावेथलाई पनि बारम्बार यसबारे जानकारी दिइरहेको छ ।
केही समयअघि बोरिसको स्वास्थ्य खस्किएपछि उनलाई आइसियुमा सारिएको थियो । उनी हिजोमात्र अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । १० दिन अघि उनलाई कोरोनाभाइरस संक्रमण देखिएको थियो ।
उनको स्वास्थ्यअवस्था निकै खस्किएको बताइएको छ । त्यसैले केहीबेरमा उनलाई भेन्टिलेटरमा राख्ने तयारी गरिएको छ ।
त्यसो त उनको सचिवालयले उनको ‘अचेत’ नभएको बताएँदै आएको छ । ‘तर, कोभिड १९ भएका बिरामीलाई आइसियुमा लगेपछि २४ घन्टाभित्र नै भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्ने हुन्छ,’ एक चिकित्सकले बिबिसीलाई बताएका छन् ।
कोभिड १९ ले फोक्सोमा आक्रमण गर्ने भएकाले बिरामीलाई सास फेर्न अत्यन्त अप्ठ्यारो हुने बताइएको छ ।
अहिलेसम्म कोभिड १९ को कुनै पनि औषधी पत्ता लागेको छैन । त्यसैले बेलायती प्रमको स्वास्थ्यअवस्थाबारे धेरैले चिन्ता गरेका छन् ।
उनलाई बेलायतकी पूर्वप्रम थेरेसा मेदेखि फ्रेन्च राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसम्मले सुस्वास्थ्यको कामना गरेका छन् । आयरल्यान्डका प्रधानमन्त्री, स्पेनका प्रधानमन्त्रीलगायतले पनि उनलाई छिट्टै ठिक हुने विश्वासका साथ ट्विटरमा बोरिसको स्वास्थ्य ठिक होस् भन्ने कामना लेखेका छन् ।
लन्डनका मेयर सद्दिक खानले पनि आफूले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका लागि प्रार्थना गरिरहेको ट्विट गरेका छन् ।
एजेन्सी | १:१:२
फ्रान्समा पछिल्लो समय कोरोना कहर झन् बढ्दो छ । सोमबार मात्र फ्रान्समा कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण ८ सय ३३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
जबदेखि फ्रान्समा कोरोनाभाइरस देखिन थालेको थियो, तबदेखि फ्रान्समा यो सबैभन्दा बढी मृत्यु भएको देश हो ।
अहिलेसम्म फ्रान्समा कोरोनाभाइरसका कारण ८ हजार ९ सय ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
युरोपेली देशमा इटाली र स्पेनपछि अब कोरोनाको सबैभन्दा ठूलो असर फ्रान्समा देखिँदै छ ।
चीनले पहिलो पटक आधिकारिक रुपमा बतायो– यसरी सुरु भएको थियो कोरोनाभाइरस
एजेन्सी | ०:५०:४१
चीन सरकारले कोभिड १९ बिमारी पत्ता लगाउने र नियन्त्रण पाएको विषयमा आधिकारिक रुपमा सोमबार एक प्रकाशन निकालेको छ ।
उक्त प्रकाशनअनुसार अघिल्लो वर्ष डिसेम्बर महिनाको अन्त्यमा कोरोनाभाइरस पहिलो पटक मानिसमा देखिएको र त्यति बेला उक्त बिमारीलाई अज्ञात कारणले भएको निमोनिया भनिएको थियो । यसबीच बारम्बार चीनमाथि कोरोनाभाइरसबारे तथ्यांकहरु लुकाएको आरोप लगाइँदै आएको छ ।
चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोग (एनएचसी)ले सोमबार कोरोनाभाइरसका कारण अहिलेसम्म चीनमा ३३३१ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । एनएचसीका अनुसार अहिलेसम्म चीनमा संक्रमितको संख्या ८१७०८ पुगेको छ । यीमध्ये अहिले चीनमा १२९९ जनाको उपचार भइरहेको छ भने ७७०७८ जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।
चिनियाँ सरकारी मिडिया शिन्ह्वाका समाचार एजेन्सीले उक्त प्रकाशनलाई हवाला दिँदै लेखेको छ– डिसेम्बरमा अज्ञात कारणले भएको निमोनियाको उपचार गर्न ३० डिसेम्बरमा नै त्यहाँको स्वास्थ्य विभागले सम्बन्धित निकायहरुलाई पत्राचार गरेको थियो ।
एजेन्सी | २३:३:३
एजेन्सी– आइतबार पनि लगातार मृतकको संख्या घटेपछि इटालीमा अब कोरोनाभाइरस प्रकोप घट्ला भन्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, सोमबार फेरि इटालीमा आइतबारको भन्दा १ सय बढीले ज्यान गुमाएका छन् ।
सोमबार इटालीमा कोरोनाभाइरसका कारण ६३६ जनाको निधन भएको छ । आइतबार त्यहाँ ५२५ जनाको मृत्यु भएको थियो । यसका साथसाथै अब इटालीमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १६५२३ पुगेको छ ।
अहिलेसम्म कोरोनाका कारण विश्वमा सबैभन्दा बढी मृत्यु इटालीमा भएको छ ।
अब इटालीमा एक लाख तीस हजारभन्दा धेरै मानिस कोरोना संक्रमित भएका छन् । सोमबार मात्र इटालीमा ३५९९ नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् ।
तेलंगनाका मुख्यमन्त्रीले भने– १५ अप्रिलपछि पनि २१ दिने लकडाउन गरौँ
एजेन्सी | २२:४२:२
अहिले भारतमा कोरोनाभाइरसविरुद्ध लड्नका लागि २१ दिने लकडाउन चलिरहेको छ । तर, यहीबीच अब यो लकडाउन के हुने र १५ अप्रिलपछि के हुने भन्ने चर्चा पनि चल्न थालेको छ ।
कतिपयले अहिले लकडाउन पूर्णरुपमा हटाइने बताएका छन् भने कतिपयले यसलाई चरणबद्ध तरिकाले हटाउन सकिने तर्क पनि गर्न थालेका छन् ।
तर, यसबारे भारत सरकारले अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।
यसैबीच तेलंगानाका मुख्यमन्त्री चन्द्रशेखर रावले चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लकडाउनलाई जारी राख्न सिफारिस गरेका छन् । उनले भारतसँग कोरोनाभाइरसविरुद्ध लड्ने एउटै हतियार लकडाउन भएको बताएका छन् ।
‘बरु खस्किएको अर्थतन्त्रलाई फेरि माथि ल्याऔँला,’ उनले भनेका छन्, ‘तर, मृत्यु भएका जीवनलाई फेरि कसरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ र ?’
फरक धार | १८:३६:५१
एजेन्सी– विश्वभर कोरोनाभाइरसका कारण हुने रोग कोभिड १९ तेल लाख मानिसलाई संक्रमण भइसकेको छ । यसका कारण ७० हजारभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भइसकेको छ ।
जोन हप्किङ्स विश्वविद्यायले जारी गरेको जाजा तथ्यांकका अनुसार अब सबैभन्दा धेरै मृत्यु इटालीमा भएको छ । त्यसपछि स्पेन, अमेरिका, फ्रान्स तथा बेलायतमा कोभिड १९ का कारण धेरै मृत्यु भएको जछ ।
इटालीमा १५८८७ जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ । स्पेनमा अहिलेसम्म १३०५५ जनाको र अमेरिकामा ९६५३ जनाको मृत्यु भएको छ । फ्रान्समा मृत्यु हुनेको संख्या ८ हजार र बेलायतमा ५ हजार नाघेको छ ।
गत वर्ष डिसेम्बरको अन्त्यमा चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान सहरमा पहिलो पटक मानिसमा देखिएको कोरोना भाइरस पहिलो पटक सोमबार अमेरिकामा मानिसबाट बाघ र सिंहमा पनि संक्रमण भएको छ । योसँगै विश्व अहिले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा होमिएको छ ।
अफगानिस्तानमा कोरोनाका कारण पहिलो चिकित्सकको मृत्यु
एजेन्सी | १४:५९:३२
अफगानिस्तानमा कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट मानिसहरुको ज्यान बचाइरहेका एक चिकित्सकको मृत्यु भएको छ । अफगानिस्तानमा कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएका चिकित्सक उनी पहिलो हुन् ।
अफगानिस्तानको स्वास्थ्यमन्त्रालयले यसको पुष्टि गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ताले ती चिकित्सक काबुलको एक निजी अस्पतालमा काम गर्ने गरेको बताएका छन् । अब उनीसँगै काम गर्ने अन्य २० जनाको पनि कोरोना टेस्ट गर्न लागिएको छ ।
अहिलेसम्म अफगानिस्तानमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३६७ पुगेको छ । अनि त्यहाँ १० जनाको मृत्यु कोभिड १९ का कारण भएको छ ।
अलिबाबाका ज्याक माले अफ्रिका पठाए टेस्टिङ किट्स
एजेन्सी | ११:५०:१९
एजेन्सी– अलिबाबाका संस्थापक ज्याक माले अफ्रिकामा कोरोनाभाइरसविरुद्ध लड्न सहज होस् भनेर मेडिकल सामाग्री पठाएको जनाएका छन् ।
चिनियाँ अनलाइन सन्चलनबाट अर्बपति बनेका ज्याक माले केही समयअघि नेपालमा पनि मेडिकल सामाग्री पठाएका थिए । उनले अहिले अफ्रिकामा सयौँ भेन्टिलेटर, हजारौँ पिपिई र अन्य मेडिकल सामाग्री पठाएको जनाएका छन् ।
यसअघि उनले इथियोपियामा पनि यस्तै सहयोग गरेका थिए ।
एजेन्सी | ०:५८:४०
एजेन्सी– बेलायती महारानी एलिजावेथले बेलायतवासी र कमनवेल्थ राष्ट्रहरुका लागि विशेष सम्बोधन गरेकी छिन् । बेलायतमा गद्दी सम्हालेको ६८ वर्षमा उनले यो चौथों पटक सम्बोधन गरेकी हुन् ।
कोरोनाभाइरसको महामारीले विश्वभर र बेलायतमा पारेको समस्याबारे एलिजावेथले आफ्ना कुराहरु राखेकी छिन् । उनले प्लेगको महामारीको समय पनि सम्झिँदै त्यति बेला आफू ‘केटाकेटी’ भएको र परिवारसँग छुट्टिन पर्दा दुखद अनुभव भएको बताएकी छिन् ।
यतिमात्र होइन, उनले बेलायती स्वास्थ्यकर्मी र विश्वभरका स्वास्थ्यकर्मीलाई धन्यवाद पनि दिएकी छिन् ।
‘हामीले जित्नेछौँ, हामी सफल हुनेछौँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले हामीले एकअर्कालाई भेट्न नमिल्ने समय आएको छ । तर, भोलि फेरि हामी भेट्नेछौँ ।’ यो उनले युद्धको समयबारे भेरा लिनले लेखेको गीतलाई उद्धृत गरेकी हुन्– वी विल मिट अगेन ।
उनले अहिले कोरोनाभाइरसविरुद्धको लडाइँ यसअघिका अरु लडाइँहरुभन्दा फरक भएको भन्दै यसमा सबैजना एकजुट भएर लाग्ने हो भने जित निश्चित भएको पनि बताएकी छिन् ।
उनले बेलायती स्वास्थ्यकर्मीलाई धन्यवाद दिँदै सुरुवात गरेको सम्बोधनमा भनेकी छिन्– अहिले विश्वभरबाट मुटु हल्लाउने खबर आइरहेका छन्, तर हामी भोलि यसलाई जितेर अगाडि आउने छौँ ।
यो समयमा दैनिक खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने देखि लिएर अन्य काममा पनि संलग्न भइरहेकाहरुलाई पनि उनले धन्यवाद दिएकी छन् ।
चेक रिपब्लिकले फ्रान्सका कोरोनाभाइरस संक्रमितको उपचार गर्ने
एजेन्सी | ०:३३:४४
चेक रिपब्लिकका प्रधानमन्त्री एन्ड्रेज बेबिसले उनको देशले फ्रान्सका कोभिड १९ का संक्रमितलाई उपचार गर्ने बताएका छन् । फ्रान्सले सहयोग माग गरेकाले आफूहरुले यो निर्णय लिएको उनले बताएका छन् ।
सामाजिक सन्जालमा लेख्दै उनले फ्रान्समा अहिले कोरोनाभाइरस कारण उत्पन्न भएको परिस्थितिलाई अलिक सहज बनाउन यो गर्न लागिएको बताएका हुन् ।
‘फ्रान्सले हामीसँग सहयोग मागेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीसँग अहिले उनीहरुलाई सहयोग गर्ने अवस्था छ, हामी सहयोग गर्छौँ ।’
त्यसो त चेक रिपब्लिकमा पनि ४५४३ जनामा कोभिड १९ देखिएको छ । त्यहाँ अहिलेसम्म ६७ जनाले कोभिड १९ का कारण ज्यान गुमाउका छन् ।
इटालीमा १०४ वर्षकी हजुरआमाले जितिन् कोरोनाभाइरस
एजेन्सी | २३:१५:४८
एजेन्सी– युरोपेली मुलुक इटाली कोरोनाभाइरसका कारण निकै प्रभावित भएको छ । त्यहाँ अहिलेसम्म १६ हजारभन्दा धेरैले कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
आइतबार चाहिँ त्यहाँ मृत्यु हुनेको संख्या दुई साता यताकै सबैभन्दा कम थियो ।
अनि आइतबार नै इटालीबाट अर्को खुसीको समाचार पनि आएको छ । समाचार हो, १०४ वर्षकी अदा जानुस्सोले कोभिड १९ लाई पराजित गरेकी छिन् । उनी उत्तरी इटाली लेसोनाकी हुन् ।
उनी त्यहाँ एक नर्सिङ होममा बस्थिन् जहाँ अन्य २० जनाको कोरोनाभाइरसका कारण निधन भएको छ ।
‘उनी ठिक हुनु ठूलो खुसीको कुरा हो,’ त्यहाँको पत्रिका ला रिपब्लिकामा उनका चिकित्सक कार्ला फुर्नोले बताउका छन् ।
उनी एक मात्र वृद्धा होइनन् जसले कोरोनाभाइरसलाई पराजित गरेकी छिन् । तर, उनको यो जितले कोरोनाभाइरसविरुद्धको लडाइँमा सकारात्मक आश थप्ने विश्वास गरिएको छ ।
बेलायती स्वास्थ्यमन्त्रीले भने– कोरोनाका कारण मैले दुई जना प्रिय व्यक्ति गुमाएँ
एजेन्सी | २२:२५:३०
एजेन्सी– बेलायती स्वास्थ्यमन्त्री म्याट हानककले आफूले पनि कोरोनाका कारण दुई प्रिय व्यक्ति गुमाएको बताएका छन् । आइतबार बेलायती सरकारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा उनले भनेका छन्, ‘हामी समवेदना प्रकट गर्छौँ । मैले पनि मेरा प्रिय दुई व्यक्ति गुमाएको छु, मलाई थाहा छ, यो कति अप्ठ्यारो समय हो ।’
उनले अहिलेसम्म कोरोना भाइरस भइसकेपछि कसरी मानिसहरुले इम्युनिटी पावर विकास गर्छन् भन्ने पनि निश्चित नभइसकेको र कोरोना जुनसुकै तरिकामा पनि फैलिन सक्ने भएकाले खतरानक भाइरस भएको छ । अनि यही कारण उनले अहिले घरभित्र बस्नु वा सोसियल डिस्टेन्सिङ नै यसबाट बच्ने एकमात्र उपाय भएको पनि बताएका छन् ।
लिबियाका पूर्वप्रधानमन्त्रीको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु
एजेन्सी | २१:३५:५०
एजेन्सी– लिबियाका पूर्वप्रधानमन्त्री महमूद जिब्रिलको इजिप्टको एक अस्पतालमा निधन भएको छ । उनलाई केही दिनअघि कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ।
स्थानीय मिडियाका अनुसार जिब्रिलको राजनीतिक पार्टी फोर्सेज एलायन्सले उनलाई २६ मार्चमा कोरोना भाइरस परीक्षणमा टेस्ट पोजेटिभ आएको जानकारी दिएको छ ।
बेलारुसका राष्ट्रपतिले भने– भोड्का पिए कोरोनालाई जितिन्छ
एजेन्सी | १८:४६:६
अहिले विश्व कोभिड १९ रोगका कारण प्रताडित भएको छ । मानिसहरुलाई निकै ठूलो समस्यामा कोरोना भाइरसले पारेको छ । तर, बेलारुसले चाहिँ यसलाई नजरअन्दान गरेको छ । त्यहाँका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकाशेन्कोले बारम्बार मानिसहरुलाई कोरोनाका कारण विचलित नहुन अनुरोध गरिरहेका छन् र टिप्स पनि दिएका छन् ।
अचम्मको कुरा त उनले दिएको टिप्स नै अचम्मको छ । उनले भोड्का पिएर खेतमा काम गर्न जाने हो भने कोरोना भाइरसले केही नहुने बताउँदै आएका छन् ।
त्यसो त बेलारुसमा अहिलेसम्म ४४० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिइसकेको छ ।
राष्ट्रपति एलेक्जेन्डरले यतिमात्र होइन, बेलारुसमा कोरोनाका कारण अहिलेसम्म चार जनाको मात्र मृत्यु भएको पनि बताएका छन् ।
अनि उनले देशमा रेष्टुरेन्ट खोल्न, बजार खोल्न पनि आदेश दिइरहेका छन् । कतिसम्म भने युरोपमा अहिले एक्लै फुटबल खेलाइरहेको छ, बेलारुसले ।
उनले भोड्का पिए पनि धेरै पिउन नहुने मात्र बताएका छैनन्, मानिसहरुलाई सौना बाथ लिन पनि अनुरोध गरिरहेका छन् ।
कोरोना भाइरसः सिंगापुरमा अचानक बढे संक्रमित
एजेन्सी | १८:२६:४५
सिंगापुरमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या ह्वत्तै बढेको छ । पछिल्ला २४ घन्टामा त्यहाँ कम्तिमा पनि नयाँ संक्रमितहरुको संख्या १२० पुगेको जानकारी दिइएको छ ।
चीनपछि पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिए पनि सिंगापुरमा सख्त प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यसका कारण त्यहाँ कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न पाएको थिएन ।
सिंगापुरमा पहिलो कोरोना संक्रमित फ्रेबुअरीमा भेटिएका थिए । तर, सिंगापुर सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध तथा लकडाउनका कारण त्यहाँ संक्रमितको संख्या बढ्न पाएको थिएन ।
योसँगै अब फेरि एशियामा कोरोना कहर बढ्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
कोरोना भाइरसः स्पेनबाट लामो समयपछि आएको ‘खुसीको खबर’
एजेन्सी | १७:२०:२
एजेन्सी– कोरोना भाइरसका कारण स्पेनमा मृत्यु हुनेको संख्या बढेर १२ हजार ४१८ भएको छ ।
२४ घन्टामा स्पेनमा ६७४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
तर, यो एक साता यता एक दिनमा भएको निकै कम संख्या हो । स्पेनमा यो साता मृत्यु हुनेको संख्या सधैं ८ सयभन्दा बढी थियो ।
त्यसैले अब विज्ञहरुले स्पेनमा कोरोना संक्रमण विस्तारै कम हुँदै जाने अनुमान गर्न थालेका छन् ।
बेलायतमा कोरोनाका कारण २० हजारसम्मको मृत्यु हुने
एजेन्सी | १६:८:९
एजेन्सी– बेलायतमा ७ हजारदेखि २० हजारसम्म मानिसको मृत्यु हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । कोरोना भाइरसका संक्रमित दैनिक बढिरहेको समयमा बेलायतबाट यो अनुमान त्यहाँका वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञले गरेका हुन् ।
बिबिसीका एन्ड्र्यु मारसँग कुरा गर्दै प्रोफेसर निल फर्गुसनले भनेका छन्, ‘बेलायतमा ७ हजारदेखि २० हजारसम्म मानिसको मृत्यु हुनसक्छ ।’ उनले अहिले भइरहेको लकडाउनले त्यहाँ केही राम्रो प्रदर्शन गरेको र कोरोना भाइरस संक्रमण रोकिन सक्ने अनुमान पनि बढिरहेको बताएका छन् ।
अब १० दिन अझ बढी संवेदनशील हुनु पर्ने उनले जानकारी दिएका छन् । ‘हामीले यसलाई कसरी लिन्छौँ भन्ने पनि हो,’ उनले भनेका छन् ।
ट्रम्पले मोदीलाई दिए जवाफ– जति सक्छु, सहयोग गर्छु !
एजेन्सी | १५:३१:२
कोरोना संकटका कारण अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सबै देशहरुसँग सहयोगको याचना गरिरहेका छन् । विभिन्न देशसँग विभिन्न औषधि माग गरिरहेका ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन औषधि दिन अपिल गरेका थिए ।
उनले फोनमा नै मोदीसँग यो अनुरोध गरेका थिए ।
अब भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यसको जवाफ दिएका छन् । उनले ट्रम्पलाई आफूले जति सक्छु, सहयोग गर्छु भनेका छन् ।
यसअघि भारतले औषधि निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । मोदीले चाहिँ ट्रम्पलाई पहिले आफ्नो देशमा राखेर बढी भएको औषधी मात्र सहयोग गर्ने जानकारी दिएका छन् । हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मलेरियाको दशकौं पुरानो औषधी हा् । यसको सबैभन्दा धेरै उत्पादन भारतमा मात्र हुन्छ ।
कोरोना फैलाएको आरोपमा उत्तर प्रदेशमा एक जनाको गोली हानी हत्या
एजेन्सी | १४:१४:३८
भारतको उत्तर प्रदेशमा प्रयागराज जिल्लाको करेली क्षेत्रमा आइतबार विहान एक युवाको गोली हानि हत्या गरिएको छ । आक्रमण गर्ने युवालाई त्यहाँ भीडले समातेर प्रहरीमा बुझाएको छ । यो मुद्दामा प्रहरीले अन्य एकलाई पनि पक्राउ गरेको छ ।
यी दुई युवाबीच चिया पसलमा झगडा भएको र अर्का व्यक्तिले कोरोना फैलाएको भन्दै उनीमाथि गोली प्रहार भएको त्यहाँको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा फेला पारेको छ ।
अबको साता झन् धेरै मृत्यु हुनेछः ट्रम्प
एजेन्सी | १३:३०:१२
एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी जनतालाई अब अझ कठीन साता आउनै बाँकी भएको बताएका छन् ।
‘अबको साता झन् कठीन हुनेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘अबको साता झन् धेरै मृत्यु हुनेछ ।’
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूहरु कोरोना संक्रमण रोक्न लागिरहेको र भ्याक्सिनको विकास भइरहेको पनि बताएका छन् । अमेरिकामा अहिलेसम्म ८ हजार ५ सय जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, त्यहाँ विश्वमा अरु देशको भन्दा बढी ३ लाख १० हजारभन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
दोस्रो परीक्षणमा पनि ट्रम्पमा देखिएन कोरोना संक्रमण
एजेन्सी | ३:४२:४१
एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि कोरोना परीक्षण गराएका छन् । यसअघि पनि उनले कोरोना भाइरसको परीक्षण गराएका थिए ।
यसअघिको जस्तै यसपटक पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पमा कोरोना भाइरस देखिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सन्चारमाध्यमका अनुसार ह्वाइट हाउसमा कोरोना संक्रमित व्यक्तिसँग बोल्दा पनि कोरोना संक्रमण हुनसक्छ भन्ने बिफ्रिङ दिएपछि ट्रम्पले दोस्रो पटक कोरोना संक्रमणको परीक्षण गराएका थिए ।
यसअघि उनको चिकित्सकीय टिममा एक जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनले परीक्षण गराएका थिए । त्यसो त, ब्राजिलका एक उच्च पदस्थ अधिकारीलाई पनि ट्रम्पलाई भेटेर गएपछि कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको थियो । तर, ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सोनारोलाई कोरोना देखिएको थिएन ।
उनले आफूले केही समयअघि आजै याे टेस्ट गरेकाे र यसका लागि १५ मिनेटमात्र लागेकाे पनि बताए ।
ट्रम्पले भने– कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनमा निकै प्रगति भएको छ
एजेन्सी | ३:२५:३९
एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन विकासमा प्रगति भएको जनाएको छ । ‘धेरै तीव्र गतिमा यसमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘र, यसको प्रतिफल पनि राम्रो आउने निश्चित छ ।’
स्थानीय समयअनुसार बिहिबार गरिएको अमेरिकी कोरोना भाइरसविरुद्ध टास्क फोर्सको ब्रिफिङमा डोनाल्ड ट्रम्पले यस्तो बताएका हुन् । उनले अमेरिकामा अब विस्तारै कोरोना भाइरस संक्रमण कम हुँदै जाने विश्वास लिएको पनि बताएका छन् ।
यसका साथसाथै उनले अमेरिकीहरुले सरकारले उपलब्ध गराउने १२ सय डलर कसरी पाउन सक्छन् भन्ने पनि जानकारी दिएका छन् ।
अमेरिकामै अब अमेजनले एन ९५ मास्क सर्वसाधरणका लागि बिक्री नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
इरानका सभामुखलाई कोरोना संक्रमण
एजेन्सी | २:३३:२७
इरानी संसदका सभमुखलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ । अलि लारिजानी अब इरानमा सरकारी अधिकारीमा कोरोना संक्रमण देखिएका सबैभन्दा उच्चपदस्थ अधिकारी भएका छन् ।
उनी १२ वर्षदेखि इरानमा सभामुख पदमा छन् । उनी इरानको सुरक्षा परिषद्का सदस्य पनि हुन् ।
उनी यसपटक चाहिँ संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएनन् । अब त्यहाँ को सभामुख हुने भन्ने विषय कोरोना भाइरसकै कारण केही पछिका लागि धकेलिएको छ ।
अहिले इरानमा ५० हजारभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको बताइएको छ । त्यहाँ ३ हजार १ सय ६० जनाको कोभिड १९ का कारण मृत्यु भइसकेको छ ।
रुसमा लकडाउन ३० अप्रिलसम्म
एजेन्सी | २३:५२:५६
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले देशमा लकडाउनको अवधि ३० अप्रिलसम्म बढाउने घोषणा गरेका छन् । उनले देशमा लकडाउन बढाउने घोषणा गर्नुका साथसाथै अहिले रुपमा फरक फरक ठाउँमा फरक फरक अवस्था भएको पनि बताएका छन् ।
उनका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणको सबैभन्दा खराब स्थिति अहिले रुसको मस्कोमा गम्भीर अवस्थामा छ । उनले स्थानीय प्रशासन तथा स्वास्थ्यकर्मीको प्रयासका बाबजुद त्यहाँ कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको बताएका छन् ।
पछिल्लो २४ घन्टामा रुसमा कोरोना संक्रमित ७७१ जना देखिएका छन् । योसँगै रुसमा संक्रमितको संख्या ३५४८ पुगेको छ ।
दिल्लीमा कोरोना संक्रमित चिकित्सककी गर्भवती पत्नी पनि कोरोना संक्रमित
एजेन्सी | २२:२२:३०
एजेन्सी– नयाँ दिल्लीमा कोरोना संक्रमित पाइएका एम्स अस्पतालका चिकित्सककी पत्नीमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
उनकी पत्नी गर्भवती थिइन् । भारतको समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार नौ महनिाकी उनकी गर्भपति पत्नी पनि एम्स अस्पतालकै चिकित्सक हुन् ।
अब उनलाई पनि एम्स अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ । त्यहाँ नै उनको डेलिभरी गराइने पनि बताइएको छ ।
अमेरिकी डेमोक्रेट्सको अधिवेशन सर्यो
एजेन्सी | २२:१९:३६
एजेन्सी– बढ्दो कोरोना कहरका कारण अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टीले आफ्नो अधिवेशन सार्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि जुलाईमा हुने भनिएको अधिवेशन अब अगस्टमा हुने भएको छ । यो अधिवेशनले डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार चयन गर्छ ।
एक साता लामो यो कार्यक्रम अब १७ अगस्टमा सुरु हुने भएको छ ।
डेमोक्रेटिक पार्टीका सम्भावित उम्मेदवार जोइ वाइदेनले यो प्रस्ताव पार्टीमा राखेका थिए । नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीबाट अहिले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नै उम्मेदवार हुँदैछन् ।
कोरोना महामारीबीच भारतीय प्रम मोदीले तेस्रो पटक देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने
एजेन्सी | १८:४३:४२
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फेरि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । उनको यो सम्बोधन शुक्रबार विहान भारतीय समयअनुसार ९ बजे हुने भएको छ । मोदीले ट्विटरमा यसको जानकारी दिएका हुन् ।
योभन्दा पहिले उनले २४ मार्चमा देशको नाममा सम्बोधन गर्दै २१ दिनको लकडाउन घोषणा गरेका थिए । उनले मानिसहरुलाई उनीहरुकै भविष्यका लागि पनि यो लकडाउन अत्यन्त जरुरी भएको बताएका थिए ।
त्यसअघि उनले २२ मार्चमा भारतमा जनता कर्फ्यू लगाउने आह्वान गर्दै देशवासीको नाममा सम्बोधन गरेका थिए ।
थाइल्यान्डमा देशभर कर्फ्यू
एजेन्सी | १८:३८:५२
काठमाडौं– कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि थाइल्यान्डले देशभर कर्फ्यू लगाएको छ ।
शुक्रबारबाट लागू हुने भनिएको यो कर्फ्यू विहान १० बजेबाट साँझ ४ बजेसम्म लागू हुने भएको छ । थाइल्यान्डका प्रधानमनत्री प्रायुथ चान ओचाले अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्नका लागि यही नै अन्तिम उपाय भएको बताएका छन् ।
कसैले यसलाई उल्लघंन गरेमा उसलाई दुई वर्ष जेल सजाय हुने पनि बताइएको छ ।
भारतले लन्च गर्‍यो कोरोना ट्र्याक गर्ने एप
एजेन्सी | १८:३४:१०
एजेन्सी– भारत सरकारले नयाँ एप लन्च गरेको छ । विश्व कोरोना भाइरसबाट प्रताडित भएको यो समयमा आएको भारतीय एपले पनि कोरोना भाइरस संक्रमितसँग नजिकै भएको जानकारी अर्को व्यक्तिलाई दिन्छ ।
आरोग्य सेतु नामको यो यापले ब्लूटुथ र लोकेसन डाटा प्रयोग गर्ने बताइएको छ । अनि यसले कोही व्यक्ति तपाईंको नजिकै भएको र उसलाई कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको रहेछ भन्ने जानकारी दिन्छ ।
यो एपले पहिले थाहा भइसकेका कोरोना संक्रमितको डाटा लिने र त्यहीअनुसार जानकारी दिने बताइएको छ ।
यो एपले नाम, नम्बर पब्लिक नगर्ने र लिंग तथा विदेश यात्राबारे जानकारी पनि ट्र्याक नगर्ने बताइएको छ ।
टेकुमा उपचाररत दुवै जनाको कोरोना टेस्ट दोस्रो पटक पनि पोजेटिभ
फरक धार | १४:६:४
काठमाडौं– नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएका दुई जनाको उपचार अहिले टेकुस्थिट शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भइरहेको छ । उनीहरु दुवैको दोस्रो पटक कोभिड १९ को परीक्षण गरिएको छ ।
अस्पतालले जनाएअनुसार दुवै जनाको टेस्ट फेरि पनि पोजिटिभ आएको छ । अर्थात्, दुवैमा अझै पनि कोरोना भाइरस देखिएको छ । योसँगै उनीहरु थप केही दिन अस्पताल बस्नु पर्ने भएको छ ।
उनीहरुको यो टेस्ट नेगेटिभ आएको भए उनीहरुलाई डिस्चार्ज गर्ने तयारी अस्पतालले गरेको थियो ।
अहिले टेकुमा फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै आएकी १९ वर्षीया युवती र युएईबाट आएका धादिङका ३४ वर्षीय युवक उपचार गराइरहेका छन् । उनीहरु दुवैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
एजेन्सी | १:५:३६
कोरोना त्रासका कारण विश्वभर नयाँ नयाँ उपाय अपनाएर यसको रोकथाम गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
अब मौरिससमा पनि मानिसहरुले अत्यावश्यक खाद्यान्न किन्नका लागि एउटा विशेष नियम पालना गर्नु पर्ने भएको छ । त्यहाँको सरकारले मानिसहरुले अब सामान किन्न कुन बार बाहिर निस्कन पाउने भन्ने उनीहरुको थरको पहिलो अक्षरले निर्धारण गर्ने नियम बनाएको बिबिसीमा आएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रभिन्द जुगनाथले यसले कोरोनाको संक्रमण रोकथाममा सहयोग पुग्ने र मानिसहरुलाई घरबाहिर निस्किएर सामान किन्ने समय ३० मिनेटको मात्र दिइने बताएका छन् ।
त्यहाँ लगाइएको नियमअनुसार अब थर एबाट एफसम्मका अक्षरबाट सुरु हुनेले सोमबार र बिहिबार सामान किन्न पाउने छन्, जिबाट एनसम्मबाट थर सुरु हुनेले मंगलबार र शुक्रबार सामान किन्न पाउने छन् । अनि ओदेखि जेडसम्मका अक्षरबाट थर सुरु हुनेले बुधबार र शनिबार सामान किन्न पाउनेछन् । त्यहाँका पसलहरु आइतबार बन्द हुन्छन् ।
अहिले मौरिससमा १६१ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । त्यहाँ अहिलेसम्म पाँच जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ ।
अनि मौरिसले बिहिबार सकिने लकडाउन पनि अब बढाएर १५ अप्रिलसम्म लकडाउनको घोषणा गरेको छ ।
यसअघि पानामाले पनि पुरुष र महिला घरबाहिर निस्कने पाउने दिनहरु छुट्टाछुट्टै बनाएको समाचार आएको थियो :
कोरोना संक्रमण रोक्न पानामामा अनौठो नियमः महिला पुरुष सँगै बाहिर निस्किन नपाउने !
एजेन्सी | ०:३६:२९
फरक धार | २२:४३:४०
एजेन्सी– अहिले संसार कोरोना भाइरससँग लडिरहेको छ । यही समयमा पानामामा नयाँ र अलिक अनौठो लाग्ने नियम लगाइएको छ । त्यो हो– पानामामा अब महिला र पुरष सँगै बाहिर निस्कन पाउने छैनन् । यतिमात्र होइन, त्यहाँ पुरुष बाहिर निस्किने र महिला बाहिर निस्किने बार पनि छुट्याइएको छ ।
बुधबारबाट लागु भएको यो नियमअनुसार अब त्यहाँ महिलाहरु घरमा आवश्यक सामाग्री किन्न सोमबार, बुधबार र शुक्रबार घरबाट बाहिर निस्किन पाउने छन् ।
त्यस्तै, त्यहाँ पुरुषहरु अब मंगलबार, बिहिबार र शनिबारमात्र घरबाट बाहिर निस्कन पाउनेछन् । आइतबार चाहिँ सबैजना घरमा नै बस्नु पर्ने छ ।
त्यहाँको सरकारले यो नियम अब कम्तिमा पनि १५ दिनका लागि लागु हुने जनाएको छ ।
यसअघि पनि त्यहाँको सरकारले सबैलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा निस्किन आदेश दिएको थियो । ‘तर, त्यसलाई पूर्णरुपमा पालना गरिएन,’ त्यहाँका सरकारी अधिकारीलाई सिएनएनले उद्धृत गरेको छ, ‘अब महिला र पुरुष जो बाहिर निस्किए पनि दुई घन्टाभन्दा बढी समय घरबाहिर बिताउन पाउने छैनन् ।’
मध्यअमेरिकी यो देशमा अहिलेसम्म १०७५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । कोरोनाका कारण २७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
जर्मनीमा लकडाउनको समय थपियो
एजेन्सी | २२:३५:४६
एजेन्सी– जर्मनीले आफ्नो देशमा लकडाउनको समयसीमा थपेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न अब जर्मनीमा १९ अप्रिलसम्म लकडाउन हुनेछ ।
जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले अहिले बाहिर निस्कने सही समय नभएको पनि बताएकी छिन् । बरु उनले भनेकी छिन्– महामारी कुनै पनि छुट्छीलाई चिन्दैन ।
जर्मनीमा अहिलेसम्म ६७ हजार मानिसमा संक्रमण देखिइसकेको छ । त्यहाँ अहिलेसम्म ७३२ जनाको कोरोनाका कारण निधन भएको छ । जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल स्वयं कोरोना संक्रमित भएपछि अहिले क्वारेन्टाइनमा छिन् ।
पाँचौ पटक पनि कोरोना भाइरस देखिएपछि कनिकाको डाइट बदलियो
एजेन्सी | २१:३३:५७
भारतको पिजिआईमा कोरोना वार्डमा भर्ना भएर उपचार गराइरहेकी कनिका कपुरमा अझै पनि कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । उनको यो पाँचौ पटक गरिएको परीक्षण थियो । यस्तो रिपोर्ट आएसँगै कनिकाले त्यहाँका चिकित्सकहरुसँग सल्लाह गरेकी छिन् । उनको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार त देखिएको छ तर भाइरस अझै पनि उनको शरीरमा छ ।
यस्तो रिपोर्ट आएपछि उनको खानामा परिवर्तन गरिएको त्यहाँका चिकित्सकले जनाएका छन् । उनमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि खानपानमा परिवर्तन गरिएको हो ।
अब उनलाई भिटामिन, प्रोटिन तथा कार्बोहाइड्रेटको मात्र बढाएर दिन थालिएको छ । उनमा ज्वरो, खोकी तथा रुघा चाहिँ देखिएको छैन ।
यो वर्षको विम्बलडन रद्द
एजेन्सी | २१:८:२५
एजेन्सी– कोरोना भाइरसका कारण यो वर्षको विम्बलडन प्रतियोगिता रद्द हुने भएको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो चर्चित टेनिस प्रतियोगिता पहिलो पटक रद्द गरिएको हो ।
लन्डनमा हुने भनिएको यो प्रतियोगिता २९ जुनमा सुरु हुने तय गरिएको थियो ।
एजेन्सी | २१:७:५१
यो देशले लगायो कोरोना भाइरस शब्द र मास्कमाथि प्रतिबन्ध !
फरक धार | १८:५:८
एजेन्सी– अहिले विश्वमा कोरोना भाइरस सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिएका शब्द हुन् । अहिले त गुगलमा सबैभन्दा बढी खोजिने शब्द पनि कोरोना भाइरस नै हो ।
तर, एउटा देशले अहिले कोरोना भाइरस शब्दमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसरी प्रतिबन्ध लगाउने देश हो, तुर्कमेनिस्तान ।
त्यहाँ त मानिसहरुलाई मास्क लगाउन पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । इन्डिपेन्डेन्टको रिपोर्टअनुसार तुर्कमेनिस्तानको सरकारले स्थानीय मिडिया तथा त्यहाँको स्वास्थ्यमन्त्रालयले बाँडेका पर्चामा पनि यो शब्द प्रयोग नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
अनि त्यहाँको सरकारले भनेको छ कि अहिलेसम्म तुर्कमेनिस्तानमा एक जना पनि कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका छैनन् ।
अहिले विश्वमा ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको यो महामारीबारे त्यहाँ मानिसहरुलाई चर्चा गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अनि जसले यसबारे कुराकानी गरेका छन्, उनीहरुलाई प्रहरीले गिरफ्तार पनि गरेको छ ।
देशमा अहिले कोरोना भाइरस नभेटिए पनि त्यहाँको सरकारले यसलाई रोक्न कडा कदम उठाइएको पनि जनाएको छ ।
स्पेनमा लागातार पाँचौ दिन ८ सयभन्दा बढीको निधन
फरक धार | १७:३८:४०
एजेन्सी– गत वर्षको अन्तिममा चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरसको समस्यामा अहिले युरोपेली र अमेरिकी मुलुकहरु देखिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले केही समयअघि मात्रै युरोपलाई कोरोनाको इपिसेन्टर बताएको थियो ।
युरोपमा पनि इटाली र स्पेनमा यो भाइरसको निकै ठूलो तान्डव देखिएको छ । यी दुई देशमा मात्र गरेर यो भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनको संख्या २५ हजार बढी पुगेको छ ।
स्पेनमा लगातार पाँचौ दिन आज पनि ८ सयभन्दा धेरैको कोरोनाको कारण निधन भएको छ । युरोपले बुधबार पछिल्ला २४ घन्टामा ८६४ जनाको मृत्यु कोरोना कारण भएको जनाएको छ । मंगलबार ८४९ जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका थिए ।
८ सयभन्दा धेरैको मृत्यु भएको यो लगातार पाँचौ दिन हो । कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या विश्वमा इटालीभन्दा पछाडि रहेको छ ।
दिल्लीका दुई चिकित्सकमा देखियो कोरोना भाइरस
फरक धार | १७:३०:४
एजेन्सी– पछिल्ला २४ घन्टामा भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या निकै बढेको छ । अब भारतमा दुई हजारभन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
अब भारतमा चिकित्सकहरुमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण देखिन थालेको छ । दिल्लीको क्यान्सर अस्पतालमा एक चिकित्सकमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि त्यो अस्पताल नै बन्द गरिएको छ ।
अब भारतीय समाचार एजेन्सी भारतीय न्युज सर्भिसका अनुसार सफदरजंग अस्पतालमा पनि दुई चिकित्सक कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएको छ । यी दुवै चिकित्सक कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न थिए ।
अब उनीहरुले जाँच गरेका अन्य बिरामीसहित १६ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
चिकित्सकलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि दिल्लीको क्यान्सर अस्पताल बन्द
फरक धार | १३:२९:२७
एजेन्सी– दिल्ली सरकारले चलाएको एक अस्पताल बुधबारबाट बन्द गरिएको छ । त्यहाँका एक चिकित्सकमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि अस्पताल बन्द गरिएको हो ।
दिलशाद गार्डेनमा रहेको दिल्ली सरकारले चलाएको अस्पतालका ओपिडी तथा अन्य सेवाहरु बन्द गरिएको छ । त्यहाँका चिकित्सकलाई अब क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
अस्पतालका अधिकारीहरुले ती चिकित्सकलाई उनका आफन्तहरुबाट कोरोना संक्रमण भएको हुनसक्ने बताएका छन् ।
दिल्लीमा पछिल्लो समय १२० जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । त्यहाँ दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । दिल्लीको निजामुद्दीनमा एकै पटकमा १२० जनाभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । तर, यसबारे परीक्षणको रिजल्ट आइसकेको छैन ।
केही दिनमा बेलायतमा दैनिक २५ हजारको कोरोना परीक्षण हुने
एजेन्सी | १३:१४:५९
एजेन्सी– बेलायतले मिड अप्रिलदेखि प्रत्येक दिन २५ हजार जनाको कोरोना भाइरस टेस्ट गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यहाँका एक मन्त्रीले एक सन्चारमाध्यमलाई यो जानकारी दिएका हुन् ।
कोरोना भाइरसको टेस्ट गर्न आवश्यक केमिकलको कमी भएको समाचार आइरहँदा बेलायतले यस्तो तयारी गरेको हो ।
अहिले विश्वमा जति धेरै कोरोनाको टेस्ट भएको छ, त्यति नै धेरै कोरोना संक्रमित बिरामलाई बचाउन पनि सकिने बताउँदै आइएको छ ।
कोरोनाका कारण अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या ४ हजार नाघ्यो
फरक धार | १०:४८:१३
जोन्स हपकिंस विश्वविद्यालयका अनुसार अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ४ हजार नाघेको छ ।
अमेरिकामा अहिले विश्वकै सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन् । अहिलेसम्मको रिपोर्टअनुसार अमेरिकामा अहिेल १ लाख ८८ हजार १ सय ७२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ ।
फरक धार | १०:६:४३
कोरोना भाइरसको डरले अमेजनका कर्मचारीले गरे हड्ताल
फरक धार | १९:४१:१९
अमेरिकामा कोरोना भाइरसको डरका कारण इकमर्स साइट अमेजनसहित अन्य धेरै कम्पनीहरुमा दबाब बढ्दै गइरहेको छ ।
अमेरिकामा खाना डेलिभरी गर्ने फर्म इन्स्टाकार्ट तथा अमेजनका केही कर्मचारीले अब सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएको भन्दै काम गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
अमेरिकी संसदहरुले पनि अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोससँग कुरा गर्दै यसबारे चिन्ता प्रकट गरेका थिए ।
अर्कोतिर अमेजनका प्रवक्ताले आफूहरुले अहिले सबै सुरक्षा संयन्त्र अपनाएको र आफ्ना कर्मचारीहरुलाई सुरक्षित राखिरहेको बताएका छन् । तर, आफूहरुले पर्याप्त मात्रामा मास्कसमेत नपाएको भन्दै त्यहाँका कर्मचारी हड्तालमा उत्रिएका छन् ।
बेल्जियममा १२ वर्षकी युवतीको कोरोनाका कारण मृत्यु
फरक धार | १९:१५:२०
युरोपमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुने सबैभन्दा कम उमेरकी बालिका १२ वर्षकी भएको बताइएको छ ।
‘आज हामीसँग एउटा अत्यन्त दुखद कुरा छ, र मलाई योबारे जानकारी दिन पनि समस्या भइरहेको छ,’ सरुवा रोग विशेषज्ञ इमानुएल एन्ड्रले मंगलबार एक कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘यो दुर्लभ हो र यसले गर्दा हामी निकै चिन्तित छौँ ।’
१२ वर्षकी ती बालिकाको नाम गोप्य राखिएको छ । तर, बेल्जियममा उनी पढ्ने घेन्टको स्कुलमा सबै अभिभावकसँग सतर्कता अपनाइएको समाचार छ ।
बेल्जियममा अहिलेसम्म ७०५ जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् । अनि अहिले ५ हजारभन्दा बढी अस्पतालमा छन् ।
यसअघि १४ वर्षकी एक किशोर पोर्चुगलमा कोरोनाका कारण निधन भएको थियो । कोरोना भाइरसका कारण निधन हुने उनी नै अहिलेसम्मका सबैभन्दा कान्छा व्यक्ति भएको बताइएको थियो ।
स्पेनमा एकै दिन ८४९ जनाको मृत्यु
एजेन्सी | १६:८:१८
कोरोना भाइरसका कारण युरोपमा सबैभन्दा बढी प्रभावित दोस्रो देश बनेको छ स्पेन । स्पेनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ८४९ जनाले विगत २४ घन्टामा ज्यान गुमाएका छन् ।
त्यहाँ अहिलेसम्म ८१८९ जनाले कोरोना कारण ज्यान गुमाएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्पेनभन्दा इटालीमा धेरै जनाको मृत्यु कोरोना भाइरसका कारण भएको छ ।
कोरोनाका कारण हुने मृत्यु एक लाखमा रोक्न सके उपलब्धिः डोनाल्ड ट्रम्प
फरक धार | ११:२१:४३
एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अहिले अमेरिका कोरोना भाइरस संक्रमणको चपेटामा परेको बताएका छन् । उनले कतिसम्म भनेका छन् भने अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण एक लाख मानिसको मृत्यु हुनसक्छ । ‘हामीले एक लाख मानिसको मृत्युमा रोक्न सक्यौँ भने पनि अहिलेका लागि उपलब्धि हुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।
अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १ लाख ६० हजारभन्दा बढी भइसकेको छ । यो अहिले विश्वमा सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या हो । चीनमा ८२ हजार मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ।
सोमबार कोरोना भाइरस टास्क फोर्सको ब्रिफिङमा बोल्दै ट्रम्पले अहिले अमेरिकामा भेन्टिलेटर उत्पादनको काम १० कम्पनीले गरिरहेको बताएका छन् । ‘यो अरु देशले कहिल्यै गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘हामी सही बाटोमा छौँ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु ।’
उनले अहिलेसम्म अरु देशले भन्दा आफूहरुले कोरोना भाइरस संक्रमितको परीक्षण धेरै गरेकाले पनि अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या धेरै देखिएको बताएका छन् ।
कोरोना भाइरसः केरलामा ८८ र ९३ वर्षका वृद्धा भए ठिक
फरक धार | १०:४०:२१
एजेन्सी– भारतीय पत्रिका इन्डियन एक्सप्रेसमा छापिएको एक समाचारअनुसार केरलामा कोरोना संक्रमित दुई वृद्ध ९३ वर्षका थोमस र उनकी पत्नी ८८ वर्षकी मरियम्माले अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन पाउने भएका छन् । उनीहरुमा कोरोना भाइरस अब नदेखिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
दुवैजना कोरोना भाइरस संक्रमणका साथसाथै डायबिटिज र हाइपरटेन्सनका बिरामी पनि थिए । अस्पतालमा भर्ना भएपछि पनि थोमसलाई हृदयघात भएको थियो । तर, दुवैले कोरोना भाइरसमाथि जित निकालेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस वृद्ध मानिसहरुका लागि अझ बढी खतरानक भएको बताउँदै आएको छ । तर, यसबीच केरलामा भएको यो प्रगतिले पूरै भारतको स्वास्थ्य टिमलाई खुसी बनाएको छ ।
थोमसका दुई छोरा, बुहारी तथा नातिनातिनीमा पनि कोरोना भाइरस देखिएको थियो । तर, अब सबै जना ठिक भएर अस्पतालबाट फर्किँदै छन् । थोमसका छोराको परिवार २९ फ्रेबुअरीमा इटालीबाट फर्किएको थियो ।
आइ लभ रक एन्ड रोलका गायकको कोरोनाका कारण मृत्यु
एजेन्सी | १७:१३:१०
सन् ८० को दशकको चर्चित गीत हो, आइ लभ रक एन्ड रोल । त्यही गीतका गायक तथा सह लेखक अलान मेरिलको कारोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ ।
उनकी छोरी लौराले यसलाई पुष्टि गर्दै लेखेकी छिन् कि ६९ वर्षका यी गायक केही साताअघिसम्म पनि विभिन्न ठाउँमा कन्सर्ट गरिरहेका थिए ।
‘उनी निमोनियाका बिरामी भएका थिए,’ उनले भनेकी छिन् ।
आइ लभ रक एन्ड रोल चाहिँ विश्वप्रसिद्ध गीत भएको थियो । जेएन जेटका लागि सन् १९८२ मा हिट भएको यो गीतलाई पनि ब्रिट्नी स्पियर्सदेखि सबैले गाएका थिए । यही गीतको प्यारोडी आइ लभ ससेज रोल्स गत वर्ष क्रिसमसमा बेलायतमा निकै गाइएको थियो ।
कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुने उनी पहिलो गायक चाहिँ होइनन् । यसअघि कन्ट्री सिंगर जोय डिफीको पनि कोरोनाका कारण नै मृत्य भएको थियो ।
भारतमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुने संख्या ३० पुग्यो
फरक धार | १७:१:१३
चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले अब विस्तारै हाम्रो अर्को छिमेकी मुलुक भारतलाई पनि समस्यामा पार्ने निश्चित भएको छ ।
भारतमा अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या १ हजार नाघिसकेको छ । भारतमै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या अब ३० पुगेको जछ । भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार भारतमा अहिले १०७१ जना उपचार गराइरहेका छन् । त्यहाँ सबैभन्दा धेरै महाराष्ट्रमा ९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
लकडाउनमा एम्बुलेन्सले पाएन अनुमति, महिलाको बाटोमै मृत्यु
एजेन्सी | २१:४६:१३
एजेन्सी — कोरोना भाइरसका कारण अहिले विश्वका धेरै देशहरुमा लकडाउन गरिएको छ । नेपालमा आजमात्रै सरकारले लकडाउन थप ८ दिन गर्ने फैसला गरेको छ ।
उता, भारतमा यसअघि नै बुधबार २१ दिनका लागि लकडाउन घोषणा गरिएको छ । कोरोनो रोकथामका लागि गरिएको यो कदम निकै महत्वपूर्ण छ । तर, यसका कारण अरु दुर्घटना पनि बढेका छन् ।
एउटा त्यस्तै समाचार छ, भारतको । त्यहाँ प्रहरीले एउटा एम्बुलेन्सलाई अनुमति नदिँदा एक वृद्धाको बाटोमा नै मृत्यु भएको छ । कर्नाटक प्रहरीले ती महिला बोकेको एम्बुलेन्सलाई बाटोमा चल्न अनुमति दिएको थिएन । यही कारणले ७० वर्षकी ती महिलाको बाटोमा नै निधन भएको हो । त्यहाँ कर्नाटकले केरलासँग जोडिएको सीमा बन्द गरेको छ ।
कोरोना संकट अझ गहिरिन्छः बेलायती प्रधानमन्त्री
एजेन्सी | १९:५:४५
एजेन्सी– बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले देशवासीको नाममा एक चिठी लेखेका छन् । कोरोना संक्रमण देखिएपछि आइसोलेसनमा रहेका प्रधानमन्त्री बोरिसले कोरोनाको संकटको विषयमा देशवासीको नाममा चिठी लेखेका हुन् ।
उनले कोरोना भाइरस संकट थप गहिरिने बताएका छन् । ‘यो ठिक हुनुभन्दा अगाडि थप समस्या हुनसक्छ,’ उनले लेखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री जोनसनले आवश्यक परेमा देशमा अझ कडा प्रतिबन्धहरु लगाउन सकिने पनि बताएका छन् ।
कोरोनाका कारण बेलायतमा मृत्यु हुनेको संख्या १२२८
फरक धार | १८:५६:१७
एजेन्सी– गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले युरोप र अमेरिकामा अत्यधिक देखिएको छ ।
सँगसँगै यो भाइरस अहिले बेलायतमा पनि कहर बनेको छ ।
बेलायतमा पछिल्लो २४ घन्टामा २०९ जनाको मृत्यु यही भाइरसका कारण भएको छ । योसँगै बेलायतमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १२२८ पुगेको छ ।
क्वारेन्टाइनमा नबस्नेलाई सरकारले कारवाही गर्ने
फरक धार | १७:१:४५
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या एक हजार नजिक
फरक धार | ६:१:५०
एजेन्सी– भारतमा पछिल्ला २४ घन्टामा कोरोना भाइरस कोभिड १९ का संक्रमितको संख्या १४९ पुगेको छ । योसँगै भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेर ९१८ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा भारतमा कोरोना संक्रमित सबैभन्दा धेरै देखिएका हुन् ।
भारतमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि दिनहुँ बढिरहेको छ । आइतबार बिहानसम्म त्यहाँ १९ जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
ट्रम्पले पूरै न्युयोर्क सहर क्वरेन्टाइन गर्ने
फरक धार | ५:५७:२
एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको न्यूयोर्क पूरै क्वारेन्टाइन गर्नेबारे आफूले सोचिरहेको बताएका छन् । यसो गरेमात्र कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिनबाट रोक्न सकिने उनले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
‘यो हटस्पट भएको छ,’ उनले पत्रकारहरुलाई भनेका छन्, ‘म क्वारेन्टाइनबारे सोच्दै छु ।’
न्युयोर्कमा मात्र अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या ५२ हजार कटेको छ । यो अमेरिकामा संक्रमितको संख्याको आधा हो ।
न्युयोर्कका गर्भनरले केही दिनअघि नै न्युयोर्कमा अहिले कोरोना भाइरस बुलेट ट्रेनभन्दा पनि छिटो फैलिएको बताएका थिए ।
खुल्यो चीनको वुहान सहर
फरक धार | १४:३०:३४
एजेन्सी– अहिले विश्वका लागि कहर बनेको कोरोना भाइरस सबैभन्दा पहिले देखिएको चिनियाँ सहर वुहान अब विस्तारै खुल्न थालेको छ । गत वर्ष डिसेम्बरमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस वुहानमा देखिएको थियो । त्यस लगत्तै यो सहरलाई जनवरी देखि आइसोलेसनमा राख्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
अहिले पनि अन्य चिनियाँ वा अरु मानिसलाई वुहानमा छिर्न दिइएको छैन । तर, वुहानबाट मानिसहरुलाई अब बाहिर निस्किन दिइएको छ ।
त्यहाँका सन्चारमाध्यमले अब रेल स्टेसनका तस्वीरहरु प्रकाशन गर्न थालेका छन् जहाँ मानिसहरुको ठूलो भीडभाड देख्न सकिन्छ ।
कतिपय ठाउँमा पसलहरु र मार्टहरु खुलेका छन् र त्यहाँ पनि मानिसहरुको भीडभाड देख्न सकिन्छ । १ करोडभन्दा धेरै मानिस बस्ने यो ठाउँमा कोरोनाका कारण ३२३९ जनाको निधन भएको थियो । ५० हजारभन्दा धेरै यो ठाउँका मानिसमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको थियो ।
कोरोना भए/नभएको पुष्टि अब पाँच मिनेटमै
एजेन्सी | १४:२३:०
एजेन्सी– कोरोना भाइरस संकटकाबीच अब एउटा खुसीको खबर पनि आएको छ । अमेरिकाको एक प्रयोगशालाले कोरोना भाइरस जाँच्नका लागि एउटा यस्तो किट बनाएको छ जसले केवल पाँच मिनेटमै कोही व्यक्ति संक्रमित छ या छैन भन्ने एकिन गर्न सकिन्छ ।
अनि यो किट अत्यन्त सानो र हल्का भएकाले यसलाई सहजै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सकिने बनाइने पनि बताइएको छ ।
एबट ल्याबोरेटरिजले एक विज्ञप्ति निकाल्द्यै अर्को साता देखि नै यसलाई बजारमा उपलब्ध गराउने बताएको छ । शुक्रबार यसबारे प्रेस रिलिज निकाल्दै कम्पनीले यो जाँचमा केवल १३ मिनेटमात्र लाग्ने जनाएको छ ।
गरिबले होइन, धनीले फैलाएको कोरोना भाइरस
फरक धार | १३:४९:२३
विश्वमा जुनसुकै महामारी फैलिँदा पनि सबैभन्दा बढी असर यसले गरिब वर्गलाई गर्छ । तर, एउटा कुरा निकै गम्भीर छ कि यस्ता महामारी फेरि गरिब वर्गले नै फैलाएको मान्नेहरु धेरै छन् ।
विश्वमै एउटा बुझाई छ कि महामारीको फैलावटलाई जहिले पनि गरिबको काँधमा राख्न खोजिन्छ । तर, इतिहास हेर्ने हो भने यो प्रष्ट हुन्छ कि महामारीहरु सबैभन्दा पहिले उपल्लो वा धनी वर्गमा देखिन्छ । जुन मध्यम वर्ग र त्यसपछि मात्र गरिब वर्गमा पुगेको हुन्छ ।
अनि कुलिन वर्गले पनि जहिले आरोप लगाएको हुन्छ, यो महामारी खासमा गरिबहरुले उनीहरुको झुपडीबाट फैलाएका हुन्छन् ।
तर, सन् १६५ देखि १८० सम्म फैलिएको एन्टोनाइन प्लेग होस् या १५२० को आसपासमा विश्वमा फैलिएको स्मल पक्स होस् या येलो फिभर र रसियन फ्लू नै किन नहोस्, सन् १८१७ को समयमा फैलिएको इन्डियन प्लेग होस् या क्लोलेरा नै किन नहोस्, सबै सबैभन्दा पहिले धनी व्यक्तिहरुमा देखिएको थियो । त्यसबाट यी महामारी मध्यम वर्गमा पुगेको थियो अनि बल्ल गरिब वर्गलाई यसले बढी प्रहार गरेको थियो ।
र, यी सबै महामारीको कारण विश्वमा नयाँ नयाँ ठाउँमा यात्रा गरिरहेका मानिसहरु, विमानमा सवार मानिसहरु, पानीजहाजमा सवार मानिसहरुमा बढी देखिएको थियो । यसरी यात्रा गर्नेहरुले पछि यसलाई समाजमा ल्याएका थिए । र, यसले सबैभन्दा बढी गरिब वर्गलाई असर पारेको देखिन्छ ।
अब पछिल्लो समय विश्वलाई कहर बनेको कोरोनाको कुरा गरौँ । कोरोना पनि अधिकांश ठाउँमा विमानमा यात्रा गर्नेहरुबाट फैलिएको स्पष्ट भइसकेको छ । चीनको वुहानमा गत डिसेम्बारमा देखिएको कोरोना भाइरस पार्टीहरुबाट अझ बढी फैलिएको छ, ठूला मानिसहरुमा पुगेको छ । हवाइ जहाजमा यात्रा गरेको यो कोरोना भाइरस त्यसैले पनि गरिबले फैलाएको हुनै सक्दैन, यसलाई त धनीहरुले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेको प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म चार जना संक्रमित देखिएका छन् । अब उनीहरुबारे हेर्ने हो भने पनि दुई जना चीन र फ्रान्सबाट फर्किएका व्यक्ति भएको पुष्टि भएको छ । चीनमा वा फ्रान्समा पढ्न जाने व्यक्ति हाम्रो समाजमा गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति पक्कै होइनन् ।
तर, यो महामारीले सबैभन्दा बढी असर चाहिँ गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिलाई नै असर गर्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
फरक धार | २:८:४८
काजोदीले आफ्नो यात्रा सुरु गरेको अब तीन घन्टा भएको छ । अब प्रत्येक पाइलामा उनले लठ्ठीलाई दह्रो बनाएर टेक्नु पर्छ, पाखुरालाई बलियो बनाउनु पर्छ ।
जे गरेर होस्, उनले हिँड्न छोड्नु हुँदैन ।
उनी कति वर्षकी भइन् ? यो उनी आफैंलाई पनि थाहा छैन । तर, उनका आफन्तहरु भन्छन्– उनी ९० वर्षभन्दा बढी भइन् ।
त्यही परिवारको एउटा समूहसँग काजोदीले यो यात्रा तय गरेकी हुन् । अनि परिवारका सबैजना उनीभन्दा निकै अगाडि पुगिसकेका छन् ।
काजोदीको परिवार अहिले भारतको नयाँ दिल्लीको नोयडा सेक्टर १५ मा बस्छ । अनि परिवारका सबैले त्यहाँ ट्राफिकमा रोकिने गाडीमा खेलौनाहरु बेच्छन् ।
अब यो परिवारले यात्रा तय गरेको छ– ४ सय किलोमिटर टाढाको । राजस्थानको सवाइ मधुपुर भन्ने गाउँमा उनीहरु फर्किँदै छन् ।
अनि अहिले भारत छ, पूरै लकडाउनमा ।
त्यसैले उनीहरुले पूरै यात्रा पैदल गर्ने महत्वकांक्षा बनाएका छन् र निस्किएका छन् बाटोमा ।
अब काजोदीले आफ्नो अनुहार उठाउँछिन् अनि सोध्छिन्– अब पारी चोक कति टाढा छ ?
उनलाई उनकै समूहका एक पुरुषले जवाफ दिन्छन्– होला त्यस्तै २० किलोमिटर । विहान पैदल यात्रा सुरु गरेकी काजोदीले अहिलेसम्म जम्मा यात्रा गरेकी छन्– १० किलोमिटर । अनि पारी चोकबाट त गाडी भेट्ने आशामा उनीहरु अगाडि बढिरहेका छन् । तर, काजोदी र परिवारलाई यो पनि थाहा छ, देशभर अहिले सवारी साधन चलेका छैनन् ।
हिँड्दा हिँड्दै गलेकी छिन् काजोदी तर गलेको छैन उनको सपना । गलेको छैन उनको गन्तव्य र गलेको छैन उनको चाहना । कोरोना भाइरसको यो विश्वव्यापी महामारीले पनि गलाउन सक्ने छैन उनको त्यो गन्तव्यसम्मको यात्रा ।
केहीबेर विश्राम लिने मुडमा पुगेकी छिन्, काजोदी । उनी परिवारका सबैजनासँग बाटो छेउमा बस्छिन् । त्यही बेला प्रहरी आउँछन् र भन्छन्– अलिक टाढा टाढा बस्नु, हाम्रो हाकिमले देख्यो भने तिमीहरु सबैलाई पक्राउ गर्छन्, हाम्रो जागिर जान्छ ।
यी प्रहरीले यति के भनेका थिए, ९० वर्षकी काजोदी फेरि उठ्छिन् । दरिलो बनाउँछिन् आफूले टेकेको लठ्ठी र दरिलो बनाउँछिन् गन्तव्यमा पुग्ने आफ्नो सपना ।
अनि उनी हिँड्न थाल्छिन् । हिँडिरहन्छिन् ! उनले हिँड्न छोड्नु हुँदैन !
भारतीय म्यागजिन आउटलुकबाट
भारतमा ओडिसाका सबै सांसद क्वारेन्टाइनमा
फरक धार | १:७:५२
एजेन्सी– भारतमा पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या निकै बढेको छ ।
यहीबीच त्यहाँको ओडिशा राज्यका सबै विधानसभाका कर्मचारी तथा सांसदलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
त्यहाँ विधानसभालाई सचिवालयमा पनि सिफ्ट गरिएको बताइएको छ । भारतीय मिडियामा आएको समाचार अनुसार उनीहरुले पछिल्लो समय भेटघाट गरेका केही व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो ।
यस्तो हुन्छ कोरोना भाइरस, भारतीय वैज्ञानिकले जारी गरे तस्वीर
फरक धार | ०:४७:१५
एजेन्सी– भारतीय वैज्ञानिकहरुे पहिलो पटक सार्स सिओभी २ भाइरस (कोभिड १९) को सुक्ष्मतम (माइक्रोस्कोपिक) तस्वीर फेला पारेका छन् । वैज्ञानिकहरुको प्रयोगशालाका अनुसार भारतमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित देखिएका व्यक्तिबाट लिइएको स्याम्पलबाट यो तस्वीर सार्वजनिक गरिएको हो । आइजेएमआरको पछिल्लो एडिसनमा यसबारे प्रकाशित गरिएको छ ।
उता, भारतमा पछिल्ला २४ घन्टामा कम्तिमा पनि ७५ जना नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । अनि यही समयमा चार जनाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ । योसँगै भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ७ सय नाघेको छ ।
मुम्बईमा नवजात शिशुलाई पनि कोरोना
फरक धार | ०:९:२९
एजेन्सी– भारतको मुम्बईमा भर्खर जन्मिएका एक शिशुमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । उनलाई कोभिड १९ रोग देखिएको भारतीय सन्चार एजेन्सी पिटिआईले जनाएको छ ।
योसँगै अब मुम्बईमा १९ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् ।
नवजात शिशुमा कोरोना देखिएको यो पहिलो पटक हो । यसअघि विश्वमा भर्खर जन्मिएको बच्चामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको थिएन ।
इटालीमा अहिलेसम्मकै एक दिनमा सबैभन्दा बढीको मृत्यु
फरक धार | २२:४१:५०
एजेन्सी– कोरोना भाइरसको कहरले इटालीमा तत्काल नछोड्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । यो अनुमान किन आएको हो भने त्यहाँ प्रत्येक दिन मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो छ ।
पछिल्ला २४ घन्टामा इटालीमा ९६९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण एकै दिनमा मृत्यु भएको यो सबैभन्दा धेरै हो । यसअघि पनि इटालीमा नै एकै दिनमा ७४३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
अब इटालीमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ९१३४ पुगेको छ । त्यहाँ पछिल्ला २४ घन्टामा ४४०१ जनालाई संक्रमण पनि देखिएको छ । अब इटालीमा ६६ हजार ४ सय १४ जना संक्रमित छन् ।
बेलायत सरकारका प्रमुख मेडिकल अफिसर नै आइसोलसनमा !
फरक धार | २२:३४:२८
बेलायत सरकारका प्रमुख मेडिकल अफिसर प्रोफेसर क्रिस विट्टी नै आइसोलेसनमा बसेका छन् । उनले ट्विटरमा एक ट्विट लेख्दै आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको आशंकामा गत राति देखि आइसोलेसनमा बसेको जानकारी दिएका हुन् ।
प्रोफेसर विट्टीले बेलायतको सम्पूर्ण स्वास्थ्य रेस्पोन्स हेर्दै आएका थिए र उनी बेलायती सरकारका कार्यक्रमहरुमा प्रश्नको उत्तर दिन तयार हुन्थे ।
बेलायतमा यसअघि नै प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पनि कोभिड १९ भएको पुष्टि भइसकेको छ ।
कोरोना कहरः विश्वभर कन्डम अभाव हुने डर
फरक धार | २१:३०:३१
एजेन्सी– अहिले विश्वभर कहर मच्चाइरहेको कोरोना भाइरसका कारण अब छिट्टै विश्वभर कन्डमको अभाव सिर्जना हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । कन्डमको विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादकले उत्पादन बन्द गरेसँगै यो डर निम्तिएको बिबिसीमा उल्लेख गरिएको छ ।
कारेक्स बर्हाडका मलेसियामा भएका तीन उद्योगमा अहिले कन्डम उत्पादन रोकिएको छ । यो १० दिनदेखि बन्द भएपछि अहिले विश्वमा एक करोड कन्डम कम भइसकेको जनाइएको छ । कम्पनीका सिइओ मिहा कियाटले समाचार एजेन्सीहरुलाई बताएअनुसार अब कम्पनी कहिले खुल्छ भन्ने एकिन छैन ।
विश्वमा पाइने पाँचमध्ये एक कन्डम उत्पादन गर्ने यो कम्पनीले अहिले मलेशियाली सरकारसँग आफूहरुलाई खोल्न अनुमति दिन अनुरोध गरेको छ । अहिले मलेशियामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लकडाउन गरिएको छ ।
मलेशिया दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी प्रभावित देश हो । त्यहाँ २१ सय जनाभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने २६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
यसबीच मिहा कियाटले अहिले पनि माग पहिलेको भन्दा बढी भएको तर उत्पादन नै बन्द भएकाले भविष्यमा बर्बादीको समय आउनसक्ने बताएका छन् ।
कोरोना भाइरसः अमेरिकामा अन्तिम संस्कार लाइभ स्ट्रिमिङ
फरक धार | २०:५४:३३
कोरोना भाइरसका कारण बढ्दै गएको तनावबीच अब मृतकको अन्तिम संस्कारमा समेत समस्या देखिन थालेको छ । अमेरिकामा अन्तिम संस्कारमा पनि मानिसहरुलाई भेला नहुन भनिएको छ ।
सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनले यो नियम कडा रुपमा लागु गर्न अनुरोध गरेको छ ।
त्यसैले अब अमेरिकामा अन्तिम संस्कार पनि लाइभ स्ट्रिमिङको माध्यमबाट हुन थालेको छ ।
उता, इटालीमा चाहिँ एक घरका दुई जनामात्र अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन पाएका छन् ।
फरक धार | १९:६:५३
काठमाडौं– नेपालमा कोरोना भाइरसका चौथों संक्रमित भेटिएका छन् ।
उनी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत छन् । उनको अवस्था स्थिर रहेको स्वास्थ्यमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि नेपालमा तीन जना संक्रमित भेटिइसकेका छन् । यीमध्ये एक जना ठिक भएर घर गएका छन् भने दुई जनाको काठमाडौंस्थित टेकु अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
बेलायती स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पनि कोरोना !
फरक धार | १९:१:५७
एजेन्सी– कोरोना भाइरसले विश्वमा मच्चाइरहेको तहल्का तत्काल रोकिने छाँटकाँट देखिएको छैन । चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस अब युरोप र अमेरिकामा बढो समस्या बनेको छ ।
यसैबीच बेलायती स्वास्थ्यमन्त्री म्याट हानककलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
उनी कोरोनाका लक्षण देखिएपछि घरमा नै आइसोलेसनमा रहेका छन् । यसअघि आजै बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई पनि कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको थियो ।
बेलायतमा क्याबिनेटका मन्त्रीहरुमा कोरोना देखिएको उनी तेस्रो व्यक्ति हुन् ।
फेरि गरिएको परीक्षणमा पनि कनिकालाई देखियो कोरोना
एजेन्सी | १८:५६:५९
बलिउड गायिका कनिका कपुरको तेस्रो पटक गरिएको परीक्षणमा पनि उनलाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ ।
सन्जय गान्धी पोस्ट ग्र्याजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स लखनउमा उनको तेस्रो पटक कोरोना भाइरस परीक्षण गरिएको थियो ।
गायिका कनिका कपुर गत शुक्रबार त्यति बेला चर्चामा आइन् जब उनमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको खबर बाहिर आयो । उनको जाँच रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि उनी सहभागी कार्यक्रमहरुबारे पनि चर्चा गर्न थालियो ।
उनले योबीचमा केही सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाएकी थिइन् ।
लखनउमा उनी सहभागी एक पार्टीमा राजस्थानकी पूर्वमुख्यमन्त्री वसुन्धरा राजे, उनका छोरा तथा सांसद दुष्यन्त सिंह, उत्तर प्रदेशका स्वास्थ्यमनत्री जय प्रताप सिंहजस्ता भिआइपी प्रोफाइल पनि सहभागी थिए । अहिले उनीहरु सबै सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन् ।
कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई पनि कोरोना भएको आशंका !
फरक धार | १८:४७:२२
एजेन्सी– रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको आशंका गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्चारमाध्यममा आएका समाचारअनुसार उनका प्रशासनिक स्टाफमध्ये एकजना कोरोना भाइरस संक्रमित पाइएका छन् । यही आधारमा पुटिनलाई पनि कोरोना भाइरस भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको हो ।
तर, उनका प्रेस संयोजकले चाहिँ ६७ वर्षका पुटिन अहिले पनि दैनिक काम गरिरहेको बताएका छन् । ‘उनमा कुनै लक्षण देखिएको छैन,’ उनले भनेका छन् ।
रुसमा शुक्रबार एकै दिनमा सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । रुसी अधिकारीहरुका अनुसार शुक्रबार त्यहाँ १९६ नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् । योसँगै रुसमा अब १०३६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । रुसमा अहिलेसम्म कोरोनाका कारण ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
फरक धार | १६:०:२८
म्यहाट्टन अस्पतालमा किअस केलीले काम गर्न थालेको धेरै भएको थिएन । त्यहाँ नर्सिङ म्यानेजरको जिम्मेवारीमा रहेका केलीले १८ मार्चमा आफ्नी बहिनीलाई विश्वमा छाना खसेको प्रतीत गराउने किसिमको मेसेज गरेका थिए ।
उनले लेखेका थिए– मलाई कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ ।
अनि अर्को मेसेज पठाएका थिए– म अहिले आइसियूमा छु ।
त्यसपछि उनलाई बहिनीको तारान्तार फोन आएको थियो । त्यो फोनलाई उनले उठाएनन्, त्यसको पनि मेसेज नै लेखे– म बोल्न सक्दिनँ, मेसेज गर्न सक्छु ।
उनी आइसियुमा थिए । उनले बहिनीलाई मेसेज पठाइरहेका थिए । र, उनले फेरि मेसेज पठाए– बआमालाई नभन्नू, उनीहरु आत्तिन्छन् !
१८ मार्चमा केली र उनकी बहिनी मारिया पाट्रिस शेरोनबीच यही कुराकानी भयो ।
अनि यही नै शेरोनलाई दाइको अन्तिम मेसेज पनि भयो । एक साता पनि नबित्दै केलीको निधन भयो । योबीचमा शेरोनले आफ्नो मोबाइलबाट लगातार केलीलाई मेसेज गरिरहेकी थिइन् । तर, कुनै पनि मेसेजको जवाफ आएन ।
४८ वर्षका केली माउन सिनाइ वेस्टमा कार्यरत थिए । उनी नै न्युयोर्कमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुने पहिलो नर्स हुन् ।
उनकी बहिनीले उनलाई कहिलेकाहीँ दम देखिने गरेको तर अरु स्वास्थ्य समस्या नभएको बताएकी छिन् । ‘उसको मृत्यु रोक्न सकिन्थ्यो,’ शेरोनले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘मलाई रिस उठेको छ, ऊ स्वस्थ्य थियो ।’
अस्पतालमा उनका साथीहरु पनि रिसाएका छन् । उनीहरुको गुनासो छ– उनीहरुले आवश्यक पिपिई पाएका छैनन् । कतिपयले आफूहरुले कोरोनाविरुद्ध लड्न मास्कसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
कोरोनाविरुद्ध भारतीय सेना, लन्च गर्‍याे अपरेसन नमस्ते
एजेन्सी | १४:४८:१०
एजेन्सी– कोरोना भाइरसविरुद्ध अब भारतीय सेना पनि मैदानमा आएको छ । सेनाले अपरेसन नमस्ते लन्च गरेको छ । भारतीय सेनाका प्रमुख एमएम नरवणेका अनुसार महामारीविरुद्ध लड्नका लागि सेनाको जिम्मेवारी सरकारलाई सहयोग गर्नु भएको बताएका छन् ।
उनले अहिले बिदामा बसेका सेनालाई पनि छुट्टीमा नबस्न अनुरोध गरेका छन् । उनले अपरेसन नमस्तेले कोरोनालाई जित्ने विश्वास लिएको पनि बताएका छन् ।
अनि सँगसँगै सेना पनि फिट र सुरक्षित रहनमा ध्यान दिनु पर्ने उनले जोड दिएका छन् ।
फरक धार | ११:११:१९
विश्वमै सरकारहरु कडा भएनन् भने कोरोनाका कारण करोडौंको मृत्यु हुन्छ
फरक धार | ७:१३:१८
एजेन्सी– विश्वभरका सरकारहरुले अझ कडा कदम उठाएनन् भने कोरोनाको लडाइँसँग विश्वले हार्ने विश्वका वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । त्यसैले उनीहरुले तत्काल सरकारहरुलाई अझ कडा कदम उठाउन निर्देशन दिएका छन् । सरकारले यस्तो नगरेको खण्डमा करोडौं मानिसको ज्यान जानसक्ने पनि उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
यस्तो निष्कर्ष निकाल्दै चेतावनी दिएको कोरोनाबारे अध्ययन गरिरहेको बेलायती टिमले हो । यो समूहका वैज्ञानिकहरुले तत्काल सरकारहरुले अझ कडा कदम उठाउनु पर्ने बताएका छन् ।
यसअघि पनि कोरोनाभाइरसबारे जानकारी दिँदै आएको इम्पेरियल कलेजका वैज्ञानिकहरुले आफ्नो एक अध्ययनअनुसार यस्तो बताएका हुने । उनीहरुले अहिले नै सरकारहरु गम्भीर भएमा तीन करोड मानिसको ज्यान बचाउन सकिने समेत बताएका छन् ।
ती वैज्ञानिकहरुले विकासशील देशमा यो खतरा २५ गुणा बढी हुने पनि देखाएका छन् ।
फरक धार | ७:५:१५
हो, सालकबाट नै सरेको रहेछ मानिसमा कोरोना भाइरस !
फरक धार | २२:४:५३
अहिले कोरोना भाइसले विश्वमा तहल्का मच्चाइरहेको छ । विश्वका धेरै देशहरुमा अहिले लकडाउनको अवस्था छ । अनि वैज्ञानिकहरु अहिले कोरोना भाइरस मानिसमा कसरी सरेको रहेछ भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छन् ।
यहीबीच चीनमा व्यापक तस्करी हुने सालकमा पनि त्यही भाइरस देखिएको छ जुन अहिले मानिसमा सरिरहेको छ र विश्वलाई रुवाइरहेको छ ।
एउटा अन्तर्राष्ट्रिय टिमले सालक लगायतका जंगली जनावर अब बेचबिखन हुन छोड्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अन्यथा यस्ता जनावरबाट यस्तै खतरानाक रोग बारम्बार मानिसमा देखिने बताइएको छ । अनि यही समूहले चमेरो पनि कोरोना भाइरस संक्रमण फैलाउन जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
फरक धार | २१:४०:४९
फरक धार | १५:३७:४५
भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले २० करोड गरिब महिलाको खातामा तीन महिनासम्म ५–५ सय रुपैयाँ सरकारले दिने बताएकी छिन् । यो पैसा मातृत्व तथा महिला कल्याणलाई ध्यानमा राखेर दिन लागिएको हो ।
उनले गरिब परिवारका ८ करोड महिलालाई उज्जवला योजनाअनुसार मोदी सरकारले एलपिजी ग्यास सिलिन्डिर उपलब्ध गराउने पनि बताएकी छिन् । उनीहरुलाई अब तीन महिनासम्म निःशुल्क ग्याँस दिन लागिएको हो ।
इटाली र चीनपछि सबैभन्दा धेरै संक्रमित अमेरिकामा
एजेन्सी | १०:१३:५८
कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा धेरै संक्रमित देशमा परेको छ, अमेरिका । अमेरिकामा अब कोरोना संक्रमितको संख्या ६८५७२ जना पुगिसकेको छ । जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयले तयार पारेको डाटा अनुसार अमेरिकामा अझ लाखौँमा संक्रमण हुने देखिएको छ ।
योसँगै अमेरिका इटाली र चीनपछि सबैभन्दा धेरै संक्रमित भएको देश बनेको छ ।
कोरोनाका कारण अमेरिकामा एकै दिन २०० बढीको मृत्यु
एजेन्सी | १०:१:४३
एजेन्सी– कोरोना भाइरसले अमेरिकामा अहिले निकै सताइरहेको छ । त्यहाँ कम्तिमा पनि ६६ हजार मानिसमा यो संक्रमण फैलिइसकेको छ ।
अनि बुधबार एकै दिन अमेरिकामा २२३ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको रिपोर्ट आएको छ । मंगलबार अमेरिकामा १६४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
जनवरीमा पहिलो पटक कोरोना देखिएको अमेरिकामा अहिलेसम्म ९४४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । चार दिन अघि अर्थात् आइतबारसम्म त्यहाँ ३२६ जनाको मात्र मृत्यु भएको थियो ।
फरक धार | ९:५६:१९
काठमाडौंका टोलटोलमा प्रहरीको माइकिङ– पसल राति २ बजेदेखि विहान ७ बजेसम्म मात्र खोल्नु
फरक धार | १८:३०:४
काठमाडौं– कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनमा अब पसल खोल्ने समय तोकिएको छ । बुधबार दिउँसो प्रहरीले बानेश्वर आसपासका विभिन्न क्षेत्रमा गएर माइकिङ गरेको छ ।
प्रहरीले खाद्यान्न तथा अन्य पसलहरुलाई पनि राति दुई बजेदेखि विहान सात बजेसम्म मात्र पसल खोल्न अनुरोध गरेको छ ।
‘भर्खर प्रहरी आएर यस्तो आदेश दियो,’ बानेश्वरमा रहेको लुम्बिनी किराना पसलका सन्चालकले भने, ‘राति २ बजेदेखि विहान सात बजेसम्म मात्र पसल खोल्नु भन्ने प्रहरीको भनाइ छ ।’ उनले सरकारले खाद्यान्न पसलहरु दिनभर खुला राख्न गृहमन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेको भए पनि प्रहरीले आएर यस्तो भनेपछि आफूले मानेर पसल बन्द गरेको जनाए ।
प्रहरीले यस्तो भनेपछि बानेश्वर आसपासका सबै पसलहरु बन्द भएका छन् । बानेश्वरबाट पुरानो बानेश्वर जाने बाटोमा प्रहरीले बुधबार साँझ चार बजेतिर यस्तो माइकिङ गरेको थियो । त्यही क्रममा केही पसलका सटरसमेत प्रहरीले नै तानिदिएको थियो ।
फरक धार | १८:२३:३
मलेशियामा लम्बियो लकडाउन
फरक धार | १५:७:४२
एजेन्सी– मलेशियाले आफ्नो देशमा लकडाउनलाई लम्ब्याएको छ । अब थप दुई साता लामो लकडाउन गर्ने त्यहाँको सरकारले जनाएको हो । यसअघि पनि मलेशियाले दुई साता लामो लकडाउन गरेको थियो ।
कोरोना भाइरसका कारण दक्षिण पूर्वी एशियामा सबैभन्दा धेरै प्रभावित देशमध्ये एक हो, मलेशिया । त्यहाँ अझै पनि दैनिक संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ ।
तर, युरोप र अमेरिकाको तुलनामा यो अत्यन्त कम छ । त्यहाँ १७२ जना नयाँ संक्रमित देखिँदा संक्रमितको संख्या १८ सय पुगेको छ । अहिलेसम्म मलेशियामा १७ जनाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ ।
फरक धार | १४:४२:४३
भारतको क्याबिनेट बैठकमा सोसल डिस्टेन्सिङ
एजेन्सी | १३:४८:४१
एजेन्सी– कोरोना भाइरसको कहरबीच भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्याबिनेट बैठक बोलाएका छन् । बुधबार बसेको यो बैठकमा मन्त्रीहरु कम्तिमा पनि दुई मिटर टाढा बसेका छन् ।
भारतमा मोदीले बारम्बार मानिसहरुलाई सोसल डिस्टेन्सिङ पालना गर्न अनुरोध गरिरहेका छन् ।
उनले अहिलेसम्म कोरोनाको विषयमा गरेको दुई सम्बोधनमा पनि यसबारे कुरा उठाएका थिए । भारतमा आजबाट २१ दिनका लागि लकडाउन आह्वान गरिएको छ ।
नेपालमा तेस्रो व्यक्तिमा देखियो कोरोना
फरक धार | १३:६:२
नेपालमा थप एक व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भेटिएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अधिकारीले पुष्टि गरेका छन्।
योसहित नेपालमा भेटिएका सङ्क्रमित व्यक्तिको सङ्ख्या तीन पुगेको छ। तर तीमध्ये एक जना निको भइसकेका छन्।
प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण गर्दा कोरोनाभाइरस भएको पुष्टि भएपछि ती सङ्क्रमित व्यक्तिलाई उपचारका लागि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा राखिएको छ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका राजेशकुमार गुप्ताका अनुसार ३०-३१ वर्षका ती बिरामी केही दिनअघि एक खाडी मुलुकबाट नेपाल आएका हुन्।
चीनमा फेरि भेटिए कोरोना संक्रमित
फरक धार | ७:५१:२२
एजेन्सी– केही दिनयता कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भएको चीनको वुहानबाट खुसीको खबर आइरहेका थिए । त्यहाँ पछिल्ला केही दिन नयाँ संक्रमितहरु नभेटिएका समाचारले विश्वभर कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा लिन सकिने आशा जगाएका थिए ।
तर, मंगलबार फेरि चीनमा कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्चारमाध्यमहरुका अनुसार मंगलबार चीनमा ४७ जना नयाँ संक्रमित भेटिएका हुन् ।
त्यसो त केही दिनयता चीनले आफ्नोमा कोरोना भाइरस संक्रमित नभेटिएको बताए पनि विदेशबाट आउने केहीलाई कोरोना भाइरस देखिएको बताउँदै आएको छ ।
चीनमा अब विस्तारै जीवन सामान्य हुँदै गइरहेको छ, बेइजिङमा चिडियाघर खुल्न थालेका छन्, वुहानमा पनि विद्यार्थीहरु ५८ दिनको लकडाउन पछि विद्यालय फर्किन थालेका छन् ।
अष्ट्रेलियामा पनि ह्वात्तै बढे कोरोना संक्रमित
एजेन्सी | ७:३३:५३
एजेन्सी– अष्ट्रेलियामा गत सातासम्म कम मानिसमा देखिएको कोरोना संक्रमण अहिले धेरैमा देख्न थालिएको छ । गत सातासम्म त्यहाँ ६ सय जनामा मात्र कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । तर, यो साताका चार दिनमा नै यो संख्या बढेर २३०० पुगेको छ ।
‘हामी कोरोना संक्रमण दरका कारण निकै आत्तिएका छौँ, यो निकै छिटो फैलिएको छ,’ अष्ट्रेलियाका प्रमुख मेडिकल अफिसर डा. ब्रेन्डान मर्फीले अष्ट्रेलियालीहरुलाई बताएका छन् ।
आजबाट अष्ट्रेलियामा कडा नियमहरु लागु भएका छन् । मानिसहरुले विवाह र मलामी जाँदा पनि यी नियमको पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । अष्ट्रेलियाका विभिन्न पसलहरुलाई पनि सरकारले बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले केही समयका लागि घरमै पनि भीडभाड नगर्न र कुनै उत्सव मनाउने नाममा धेरै मानिस भेला नहुन छोड्न अनुरोध गरेका छन् ।
अष्ट्रेलियाको सिड्नीको न्यु साउथ वेल्समा अहिले सबैभन्दा धेरै संक्रमित देखिएका छन् । त्यहाँ एक हजारभन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण भएको छ । त्यहाँ एक सात वर्षे बालिका र दुई महिने बालकमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ ।
एजेन्सी | ७:१३:१५
एजेन्सी | ६:५५:२०
घरबाहिर निस्किनु खतरानक, अन्धविश्वास झन् बढीः मोदी
फरक धार | २२:५८:८
एजेन्सी– विश्वभर सन्त्रासको वातावरण बनाएको कोभिड १९ अर्थात् कोरोना भाइरसलाई संक्रमणबाट रोक्न भारतले विशेष नियम बनाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशभर पूर्णरुपमा २१ दिनको लकडाउन घोषणा गरेका छन् ।
अनि सँगसँगै उनले सामाजिक सन्जालबाट यसबारे ज्ञान पनि दिइरहेका छन् । ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, ‘अब घरबाट निस्कनु खतरानक हुनेछ ।’
अनि थपेका छन्, ‘त्यसमा पनि हाम्रा विश्वास र अन्धविश्वास झन् खतरानक हुनेछन् ।’ उनले कसैले पनि अन्धविश्वास तथा अफवाहलाई विश्वास नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।
आत्तिनु पर्दैन, जरुरी सामान उपलब्ध हुन्छः मोदी
फरक धार | २२:५३:१२
एजेन्सी– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज राति १२ बजेदेखि देशभर लकडाउन भए पनि जरुरी सामान उपलब्ध हुने भएकाले कोही पनि आत्तिनु नपर्ने बताएका छन् ।
‘अत्यावश्यक सामान त उपलब्ध हुन्छ,’ मोदीले भारतमा २१ दिनका लागि लकडाउनको घोषणा गरेपछि भनेका छन् ।
अब भारतमा आज रातिदेखि २१ दिन लकडाउन हुँदैछ ।
कोरोना भाइरसः इजिप्टमा कर्फ्यू
फरक धार | १७:५४:५३
एजेन्सी– विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरससँग बच्न विश्वका विभिन्न देशले आआफ्ना सतकर्ता अपनाएका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएका विश्वका अधिकांश देशले लकडाउन गर्ने फैसला गरिसकेका छन् ।
कतिपयले चाहिँ लकडाउनले मात्र समस्या समाधान नहुने देखेपछि कर्फ्यू लगाउने निर्णय गरेका छन् । देशैभर कर्फ्यू लगाउने निर्णय पछिल्लो समय इजिप्टले गरेको छ ।
स्पेनमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो
एजेन्सी | १७:४:२०
एजेन्सी– चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको नयाँ इपिसेन्टरका रुपमा यो महिनाको सुरुवातमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले युरोपलाई घोषणा गर्यो ।
युरोपको इटालीमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण निकै धेरैले ज्यान पनि गुमाइसकेका छन् ।
अब इटालीमा विस्तारै नियन्त्रणमा आउन लागेको यो भाइरसले स्पेनमा वितण्डा मच्चाउन थालेको छ । स्पेनमा पछिल्लो २४ घन्टामा यो भाइरसका कारण ५ सय १४ जनाको मृत्यु भएको छ । यो स्पेनमा एकै दिनमा भाइरसका कारण मृत्यु हुने सबैभन्दा धेरै संख्या हो । स्पेनमा अहिलेसम्म यो भाइरसका कारण २६९६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । त्यहाँ झन्डै ४० हजारमा भाइरस संक्रमण देखिएको छ ।
ग्रान्डीले कोरोना शंकास्पदको उपचार गर्न नमानेपछि मन्त्रालयले सोध्यो स्पष्टिकरण
फरक धार | १५:५६:१३
काठमाडौं– कोरोना भाइरस शंकास्पद बिरामीलाई आफूहरुले उपचार नगर्ने खालका अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राजधानीका दुई अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोधेको छ । ग्रान्डी अस्पताल र अल्का अस्पताललाई मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोधेको हो ।
यी दुई अस्पतालले विभिन्न सन्चारमाध्यममा कोरोना भाइरसको उपचार आफ्नो अस्पतालमा नगर्ने, बिरामी आए फर्काइदिने खालका अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसैलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोधेको हो । ग्रान्डी अस्पतालका प्रमुख चक्रराज पाण्डेले एक टिभीमा अन्तर्वार्ता दिँदा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यस्तै, अल्काका प्रमुख कुमार थापाले एक अनलाइनले त्यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
मन्त्रालयले स्पष्टिकरण दिएपछि ग्रान्डीका प्रमुख पाण्डे मन्त्रालयमा नै पुगेर स्पष्टिकरण दिएका छन् । उनले आफू सरकारको निर्देशन पालना गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
फरक धार | १४:८:३७
कोरोना भाइरस संक्रमित युवती आएकै विमानमा आएका थिए काभ्रेका दुई जना, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा घरमा छन्
फरक धार | १३:२२:७
काठमाडौं– १८ मार्चमा फ्रान्सबाट दोहा हुँदै काठमाडौं आएकी एक युवतीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले बताएका थिए ।
सो विमानमा फ्रान्समा अध्ययनका लागि पुगेकी १९ वर्षकी युवती थिइन् । उनमा कोरोना भाइरस देखिएपछि विमानमा आएका अन्य व्यक्तिहरुको पनि खोजी सुरु भएको छ ।
सोहीमध्ये केही अहिले आफैं अस्पतालमा पुगेर घरमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न थालेका छन् ।
कतार एयरवेजको फ्लाइट नम्बर क्युआर ६५० विमानमा सो दिन काभ्रेका दुई युवा पनि आएको बुझिएको छ । बनेपा नगरपालिकाका वडा नम्बर २ का एक युवाले नगरपालिकाको सम्पर्कमा आफू पुगेको बताएका छन् । उनले आफूलाई कुनै पनि फ्लूको लक्षण नदेखिएको पनि जानकारी दिएका छन् । बनेपामा धुलिखेल अस्पतालमा पुगेर उनले परीक्षण समेत गराएका छन् । र, आफू घरमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहेको बताएका छन् ।
उता, यही विमानमा आएका काभ्रको अर्का एक युवाल पनि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् ।
त्यस्तै, बाग्लुङका दुई जना र गोरखाका एक जना युवा पनि सोही विमानमा आएको खुलेको छ । उनीहरु पनि सामान्य स्वास्थ्य जाँचसँगै घरमा नै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छन् ।
यता, टेकु अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी कोरोना संक्रमित ती युवतीको स्वास्थ्य स्थीर रहेको जनाइएको छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार उनको फेरि एकपटक कोरोना परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
बेइजिङमा फेरि खुल्यो चिडियाघर
एजेन्सी | १३:८:४५
एजेन्सी– कोरोना भाइरसको यो सन्त्रासकाबीच चीनबाट एउटा खुसीको समाचार आएको छ । अब चीनमा ५८ दिनअघि बन्द भएको चिडियाघर मानिसहरुका लागि खुलेको छ ।
बेइजिङ चिडियाघर सोमबारबाट आम मानिसका लागि खुला गरिएको हो ।
स्थानीय सन्चारमाध्यमहरुका अनुसार चिडियाघरमा लामो समय शान्त भएपछि कयौँ जनवारहरुको मुड खुसी देखिन्छ ।
‘चिडियाघर खाली हुँदा केही जनावरहरु विशेष गरि पान्डाहरुले निकै रमाइलो गरे,’ चाइना डेलीले चिडिया घरका झाङ छेन्ग्लिनलाई उद्धृत गरेको छ । उनले यो क्षेत्रमा बारम्बार स्यानिटाइजेसन गरिएको पनि बताएका छन् ।
लकडाउनमा माेटरसाइकल लिएर घुम्न निस्किएका दुई जना बुटवलमा पक्राउ
फरक धार | १२:३७:२५
बुटवल– काेराेना भाइरस राेकथामका लागि सरकारले लकडाउनकाे निर्णय गर्याे । तर, लकडाउन उल्लंघन कुनै कामविना मोटरसाइकलमा घुम्न निस्किएका दुई जना बुटवलमा पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार बुटवलका हेमन्त घिमिरे र नवराज श्रेष्ठ चौरहा चाेकबाट पक्राउ परेका हुन् ।
उनीहरुले चलाएकाे माेटरसाइकल पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाे छ ।
भरतपुरमा लकडाउन उल्लघंन गर्ने १० जना पक्राउ
फरक धार | ११:५६:५८
भरतपुर– कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न सरकारले मंगलबारदेखि एक साताका लागि लकडाउन गरेको छ । तर, चितवनमा सरकारको यो निर्देशनको उल्लघंन गर्ने १० जना भेटिएका छन् जसलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
चितवनको नारायाणगढ तथा टाँडीबाट ती १० जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
लकडाउनको समयमा विनाकाम घरबाट निस्किएर भीडभाड गर्न खोज्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नेछ । यसरी पक्राउ पर्नेलाई ६ महिना कैदा वा ६ सय रुपैयाँ वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
क्यानेडेली प्रधानमन्त्रीले भने– अब अत्ति भयो, घर जाऊ, घरमै बस !
एजेन्सी | ३:४६:४१
एजेन्सी– क्यानेडेली प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले स्थानीय समयअनुसार सोमबार आफ्नो निवास ओटावाबाट सम्बोधन गर्दै क्यानेडेली नागरिकलाई चेतावनी दिएका छन् । उनले सरकारले लागु गरेको ‘सोसल डिस्टेन्सिङ’लाई अटेर गर्नेहरु प्रति क्रुद्ध भएर यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
‘भयो भनेपछि भयो, अब अत्ति भयो,’ उनले सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘अब घर जाऊ, घरमै बस ।’
उनले सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्ने समय भएकाले यसलाई अटेर नगर्न बताएका हुन् । ‘यदि यो सुझाव मान्न तयार हुनुहुन्न र भीडभाडमा जाने कुरालाई रोज्नुहुन्छ भने,’ उनले भने, ‘तपाईंले आफूलाई मात्र होइन, अरुलाई पनि समस्यामा पार्दै हुनुहुन्छ ।’
उनले यो कुरा जसरी पनि आफूहरुले लागु गरेरै छाड्ने पनि बताएका छन् । ‘हामी यो गरेरै छाड्छौँ,’ उनले भनेका छन्, ‘सुझाव र सल्लाह दिएर होस् या नियम लागु गर्न कडा उपाय अपनाएर नै किन नहोस् ?’
अमेरिकी सन्चारमाध्यम सिएनएनमा आएको समाचार अनुसार अहिलेसम्म क्यानडामा कोरोना भाइरसका संक्रमित १४३२ जना देखिएका छन् । क्यानडामा कोभिड १९ का कारण २० जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
मध्यरातमा भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपडेटः थप एकको मृत्यु
फरक धार | २:५१:२०
एजेन्सी– भारतमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण थप फैलिँदै गएको छ । सोमबार मध्यरातमा भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसबारे अपडेट जारी गरेको छ ।
अपडेट अनुसार सोमबार मात्र भारतमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । हिमाचल प्रदेश र पश्चिम बंगालमा एक एक जनाको मृत्यु भएको भारतीय स्वास्थ्य अधिकारीले जनाएको बिबिसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ ।
योसँगै कोरोना भाइरसका कारण भारतमा मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुगेको छ ।
भारत सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भारतमा अब कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ४६८ पुगेको छ ।
एजेन्सी | २:३४:२७
फरक धार | २३:४०:२९
फरक धार | २१:५६:३५
काठमाडौं– पछिल्लो समय विश्वलाई रुवाएको छ, कोरोना भाइरसले । योसँगै पछिल्लो सूचना प्रविधिलाई पनि विशेष प्रयोग गरेर नयाँ नयाँ काम भएका छन् ।
तर, सँगसँगै यहीबीचमा केही बदमास पनि देखिएका छन् ।
उनीहरुले मोबाइलका लागि विभिन्न एप्सहरु बनाएका छन् । त्यहीमध्ये एक हो, कोभिडलक नाम गरेको एउटा एप । अहिले यो एप विश्वभर निकै धेरै डाउनलोड भएको छ । यसले कोरोना भाइरस ट्र्याक गर्ने दाबी गरिएको छ ।
अनि एन्ड्रोइडमा अहिले अर्को पनि नोटिफिकेसन निकै भाइरल हुन थालेको छ । त्यसमा कोरोना सेफ्टी मास्क किन्नका लागि मानिसहरुलाई आग्रह गनिे गरिएको छ ।
माथि भनिएको एप र तल आएको नोटिफिकेसनले अहिले विश्वभरबाट युजर डाटा तानिरहेको र कतिपय सामान किन्नु भनेर क्रेडिट कार्डको जानकारी पनि लिएको हुनसक्ने विश्वमा गरिएका विभिन्न अनुमानले देखाएका छन् । त्यसैले कतै तपाईंले पनि यी याप वा कोरोना भाइरससम्बन्धी कुनै एप डाउनलोड गर्नुभएको छ भने तत्काल हटाउनुहोस् ।
मानिसहरुले लकडाउन नटेरेपछि महाराष्ट्रमा कफ्र्यू
फरक धार | २०:५४:५८
एजेन्सी– भारतको महाराष्ट्रमा कफ्र्यू लगाइएको छ । मानिसहरुले यसअघि सरकारले लगाएको लकडाउनलाई अटेरी गरेपछि कफ्र्यु लगाइएको हो ।
महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेले भनेका छन्– लकडाउन गर्दा पनि मानिसहरु बाटोमा आए, उनीहरुले टेरेनन्, अब कफ्र्यु लगाउनुको विकल्प भएन ।
उनले महाराष्ट्रमा कोरोनाका कारण प्रभावित नभएका जिल्लाका नागरिकलाई बचाउनका लागि यो कदम चालेको पनि बताएका छन् ।
महाराष्ट्रमा अहिलेसम्म भारतमा सबैभन्दा धेरै ९० जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् ।
इटालीपछि स्पेनमा छायो संकट, लगाइयो संकटकाल, प्रधानमन्त्रीले भने– खराब दिन अझ आउनै बाँकी छ
फरक धार | २०:४९:३८
एजेन्सी– चीनपछि युरोपमा कोरोना भाइरस संक्रमणले अहिले इटालीमा निकै ठूलो समस्या पैदा गरिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै युरोपलाई अब यो भाइरसको इपिसेन्टर बताएको छ ।
अब युरोपको इटालीपछि स्पेनमा ठूलो संकट देखिएको छ ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार आइतबारसम्म स्पेनमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १७२० पुगिसकेको छ । स्पेनमा एक दिनमा नै ३९४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
स्पेनमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या २८७५२ पुगेको छ ।
यीमध्ये २५७५ जना ठिक भएका छन् । अनि १७८५ जनालाई अहिले पनि आइसियुमा राखेर उपचार गरिइरहिएको छ ।
स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले शनिबार महामारीसँग लड्न आवश्यक सबै कदम सरकारले चाल्ने बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘अझै पनि खराब दिन आउनै बाँकी छ ।’
त्यहाँको सरकारले कोरोना भाइरससँग लड्न आपातकाल लगाएको छ । १५ मार्चमा लगाइएको यो आपत्कालीन अवस्था अझ बढाउने बताइएको छ ।
स्पेनको राजधानी मड्रिड नै यो संकटको केन्द्र बनेको छ ।
फरक धार | १९:४५:३७
फरक धार | १७:९:३२
दक्षिण कोरियाबाट खुसीको खबरः घट्न थाले कोरोना संक्रमित
एजेन्सी | १६:५१:५३
एजेन्सी– दक्षिण कोरियामा कोभिड १९ को महमारी फैलिएपछि भएका संक्रमणमा अब विस्तारै कम हुन थालेको छ । दक्षिण कोरियामा चार साताअघिदेखि त्यहाँ संक्रमितको संख्या निकै तीव्र गतिमा बढिरहेको जनाएको थियो ।
अब विस्तारै त्यहाँ संक्रमितको संख्या घट्दो छ ।
पछिल्ला २४ घन्टामा त्यहाँ जम्मा ६४ नयाँ मानिसमा संक्रमण देखिएको छ । योसँगै त्यहाँ कोरोना संक्रमित ८ हजार ९ सय ६१ पुगेका छन् । दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्म १११ जनाको मृत्यु कोभिड १९ का कारण भएको छ
देशमा कोरोना संक्रमित घट्न थाले पनि स्वास्थ्य अधिकारीहरुले अझै ढुक्क हुने समय नभएको बताएका छन् ।
दक्षिण कोरियाले यो भाइरसलाई आफ्नो काबुमा राख्न सक्नुको एउटै कारण चाहिँ त्यहाँ प्रत्येक दिन २० हजारभन्दा बढी मानिसको संक्रमण परीक्षण गर्ने गरिएको थियो ।
विराटनगर भोलिदेखि लकडाउन
फरक धार | १६:३९:०
विराटनगर– विराटनगर महानगरपालिकाले मंगलबारदेखि अनिश्चितकालिन लकडाउन गर्ने भएको छ ।
त्यहाँका व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग बसेर विराटनगर महानगरपालिकाले यो निर्णय लिएको हो । अब भोलिदेखि अर्थात् मंगलबारदेखि विराटनगर अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै पसलहरु समेत बन्द हुने भएका छन् ।
विराटनगरका मेयर भीम पराजुलीले फरकधारलाई दिएको जानकारी अनुसार यो लकडाउन कहिलेसम्म भन्ने निश्चित भएको छैन । ‘अवस्था सामान्य भएपछि अर्का सूचना ननिकालेसम्म अब सबै क्षेत्र बन्द नै हुनेछन्,’ फरकधारसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा उनले भने, ‘यसअघि नै हामीले हाट बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेका थियौँ ।’
उनले खाद्यान्न, औषधि, पानी, दूध, तरकारी र एम्बुलेन्स सेवा भने सञ्चालनमा कुनै अवरोध नहुने बताए ।
‘नेपालमा एक विद्यार्थीमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखियो’
फरक धार | १२:४१:४१
काठमाडौं– नेपालमा एक महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ ।
सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले यसको पुष्टि गरेका हुन् ।
उनका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएकी ती युवती फ्रान्सबाट आएकी हुन् । ‘१९ वर्षकी विद्यार्थी हुन्,’ स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले भने, ‘उहाँलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिइरहेका छौँ । उहाँको परिवारलाई पनि हामीले अलग राखेका छौँ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनः स्वास्थ्यमनत्रीले लगाएनन् मास्क !
फरक धार | १२:३७:१६
काठमाडौं– स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सोमबार विहान अचानक पत्रकार सम्मेलन बोलाए । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नेपाल सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका विभिन्न गतिविधिबारे जानकारी दिन स्वास्थ्यमन्त्रीले यो पत्रकार सम्मेलन बोलाएका थिए ।
कोरोना भाइरसबाट बच्न हामीले सबैभन्दा पहिलो सतकर्ता अपनाउने भनेको भीडभाडमा नजाने हो, गएकै खण्डमा पनि मास्क लगाएर बस्नु पर्ने हो ।
तर, आफैंले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री मास्क नलगाइ बसेका थिए ।
आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने सबै मन्त्रीले मास्क लगाएकै थिए ।
आज रातिदेखि अर्घाखाँची लकडाउन गर्ने निर्णय
फरक धार | १२:२६:२०
अर्घाखाँची– कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अर्घाखाँची जिल्ला आज रातिदेखि लकडाउन गरिने भएको छ ।
सोमबार विहान अर्घाखाँची सदरमुकाममा बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षताको सर्वपक्षीय बैठकले अर्घाखाँची तत्काल लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो । अब अर्को सूचना जारी नभएसम्म अर्घाखाँची लकडाउन हुनेछ ।
अब अन्य जिल्लाबाट अर्घाखाँची जिल्लामा निजी सवारी साधन पनि प्रवेश गर्न पाउने छैनन् । बैठकले मोटरसाइकलमा पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । तर, यसबीचमा मालवाहक सवारी साधन, ग्यास तथा तेलका ट्याङ्कर चाहिँ जान पाउने छन् ।
यसअघि कन्चनपुर र जुम्ला जिल्लाले पनि लकडाउन गर्ने फैसला गरिसकेका छन् ।